Chọtara 691 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 JỌN, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Mgbe Josef si nꞌụra teta, o mere dị ka mmụọ ozi ahụ nyere ya nꞌiwu. Ọ kpọọrọ Meri ka ọ bụrụ nwụnye ya.
Emesịa, Mmụọ Nsọ duuru Jisos baa nꞌọzara ka ekwensu nwaa ya ọnwụnwa.
Mgbe ahụ ekwensu hapụrụ ya laa. Ndị mmụọ ozi bịakwutere Jisọs inyere ya aka.
Ma Jisọs zara sị ya, “Soro m ugbu a, hapụ ndị nwụrụ anwụ nꞌime mmụọ ha ka ha lie ndị nwụrụ anwụ ibe ha.”
Kama ọ bụrụ na m na-esite nꞌike Mmụọ Nsọ na-achụpụ mmụọ ọjọọ, matakwanụ na alaeze Chineke abịala nꞌetiti unu.
“Mba ọjọọ nke a! Unu yiri nwoke mmụọ ọjọọ na-achị! Nꞌihi na mgbe mmụọ ọjọọ ahụ si nꞌime nwoke ahụ pụọ, mmụọ ọjọọ ahụ na-aga nꞌọzara ebe mmiri na-adịghị ịchọ ebe ọ ga-ezuru ike mgbe ọ na-achọtaghị ebe izuike,
Mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya ka ọ na-abịa, oke egwu jidere ha. Ha tiri mkpu sị, “Ọ bụkwanụ mmụọ o!” Ha chere na Jisọs bụ mmụọ.
Mgbe e mesịrị, ndị na-eso ụzọ Jisọs bịakwutere ya na nzuzo jụọ ya sị, “Gịnị mere o ji siere anyị ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ ahụ?”
Jisọs jụrụ ha sị, “Gịnị mekwaranụ Devidi jiri kpọọ ya Onyenwe m, nꞌihi na Devidi sitere na ntụzi Mmụọ Nsọ kwuo sị,
Ụmụ agwọ! Ụmụ ajụala! Unu si aṅaa chee na unu ga-agbanarị ikpe ịba nꞌọkụ ala mmụọ?
Aga m ewerekwa olu opi ike zipụ ndị mmụọ ozi ka ha gaa kpọkọtaa ndị nile a họpụtara site nꞌakụkụ nile nke eluigwe na ụwa.
“Ma o nweghị onye ọ bụla maara ụbọchị ahụ, ma ọ bụ oge mgbe ọgwụgwụ ihe nile ga-abụ. Ọ bụladị ndị mmụọ ozi amaghị ya. Ọkpara Chineke amakwaghị. Ọ bụ nanị Nna ya maara.
“Mgbe mụ bụ Nwa nke mmadụ ga-abịa nꞌebube m, mụ na ndị mmụọ ozi nile dị nsọ, mgbe ahụ ka m ga-anọ nꞌelu ocheeze ebube m.
Na mberede, oke ala ọma jijiji malitere. Mmụọ ozi Onyenwe anyị sitere nꞌeluigwe rịdata, kpụgharịa nkume ahụ e ji mechie ọnụ ili ahụ e nyibere Jisọs, nọkwasịkwa nꞌelu ya.
Ihu mmụọ ozi ahụ na-enwu dị ka amụma. Uwe ya na-achakwa ọcha dị ka ogho.
Mgbe ndị na-eche ili ahụ nche hụrụ mmụọ ozi a ha tụrụ oke egwu. Ha makwara jijiji, daa nꞌala, nọọ dị ka ndị nwụrụ anwụ.
Ma mmụọ ozi ahụ gwara ụmụ nwanyị ahụ okwu sị ha, “Unu atụla egwu, nꞌihi na amaara m na ọ bụ Jisọs onye a kpọgburu nꞌelu obe ka unu na-achọ.
Ụmụ nwanyị ahụ jiri oke egwu na ọṅụ gbara ọsọ gaa izi ndị na-eso ụzọ Jisọs ozi a mmụọ ozi ahụ ziri ha.
Mgbe ọ bụla kwa ndị mmụọ ọjọọ na-achị hụrụ Jisọs ha na-ada nꞌala nꞌihu ya na-eti mkpu akwa na-asị, “Ị bụ Okpara Chineke!”
Ndị a ka ọ ga-enyekwa ike ịgwọ ọrịa, na ịchụpụ mmụọ ọjọọ.
Ma onye ọ bụla kwuluru Mmụọ Nsọ agaghị anata mgbaghara. A gaghị agbaghara ya mmehie nkwulu a nꞌụwa a ma ọ bụ nꞌụwa ọzọ.”
Otu mgbe ahụ ha si nꞌime ụgbọ ha wụdata, onye buru ụzọ zute ha bụ nwoke mmụọ ọjọọ na-achị. O sitere nꞌebe a na-eli ozu pụta.
Mmụọ ọjọọ ahụ siri otu a kwuo okwu nꞌihi na Jisọs nyere ya iwu ka o site nꞌime nwoke ahụ pụta.
Jisọs jụrụ mmụọ ọjọọ ahụ ajụjụ sị, “Gịnị bụ aha gị?” Mmụọ ọjọọ ahụ zara sị, “Aha m bụ igwe, nꞌihi na anyị dị ọtụtụ.”
Mmụọ ọjọọ ndị a rịọsiri Jisọs arịrịọ ike ka ọ hapụ iziga ha nꞌebe dị anya.
Mmụọ ọjọọ ndị a rịọrọ Jisọs sị, “Biko, ziga anyị nꞌime igwe ezi a.”
Jisọs kwenyere ka ha banye nꞌime igwe ezi ahụ. Otu mgbe ahụ mmụọ ọjọọ ndị a bara nꞌime ezi ndị ahụ, igwe ezi ahụ nile ọnụ ọgụgụ ha ruru puku abụọ, gbaara ọsọ site na mkputamkpu ala ọnụ mmiri dakpuo nꞌime osimiri, ebe mmiri riri ha nile.
Mgbe ha pụtara, ha hụrụ Jisọs. Ha hụkwara nwoke ahụ Jisọs sitere nꞌime ya chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ. O yi uwe, nọdụ ala dị ka onye isi zuru oke.
Ndị ahụ nọ mgbe Jisọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ ahụ kọọrọ mmadụ nile ihe mere nwoke ahụ. Ha kọkwaara ha akụkọ banyere mmụọ ọjọọ ndị ahụ a chụpụrụ, na ihe mere igwe ezi ndị ahụ.
Nꞌihi ya, Jisọs banyekwara nꞌime ụgbọ mmiri. Ma nwoke ahụ Jisọs si nꞌime ya chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ rịọrọ Jisọs ka o soro ha.
Jisọs kpọrọ mmadụ iri na abụọ ahụ na-eso ya zipụ ha, abụọ abụọ. O nyere ha ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ.
Ha chụpụrụ ọtụtụ mmụọ ọjọọ, wụkwasịkwa ndị ahụ na-esighị ike mmanụ olivu, gwọọ ha.
Ma mgbe ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ya ka ọ na-aga ije nꞌelu osimiri, ha chere na ọ bụ mmụọ ka ha hụrụ. Nꞌihi ya ha bidoro iti mkpu akwa.
Ọ bụrụ na ihere na-eme onye ọ bụla nꞌihi m, na nꞌihi okwu m nꞌụwa ọjọọ a, na nꞌụwa mmehie a, ọ ga-abụkwara mụ bụ Nwa nke mmadụ ihe ihere mụ na onye ahụ inwekọ ihe ọ bụla, mgbe m ga-abịaghachi nꞌebube nke Nna m, mụ na ndị mmụọ ozi dị nsọ.”
Otu onye nꞌime igwe mmadụ ahụ zara ya sị, “Onye ozizi, akpọtaara m gị nwa m nwoke a ka ị gwọọ ya. Mmụọ ọjọọ na-esogbu ya. O mekwara ka ọ daa ogbi.
Mgbe ọ bụla mmụọ ọjọọ ahụ malitere isogbu ya, ọ na-atụda ya nꞌala. Mgbe ahụ ọ na-agbọ ụfụfụ nꞌọnụ ya, na-ata ikikiri eze. Anụ ahụ ya na-adị sisiriri dị ka onye nwụrụ anwụ. Arịọrọ m ndị na-eso ụzọ gị ka ha chụpụ mmụọ ọjọọ a, ma ha enweghị ike.”
Ha kpọtaara ya nwanta ahụ. Mgbe mmụọ ọjọọ ahụ hụrụ Jisọs, o nugharịrị nwanta ahụ nke ukwuu. Nwanta ahụ dara nꞌala na-atụrụ onwe ya nꞌala, na-agbọkwa ụfụfụ nꞌọnụ ya.
Mmụọ ọjọọ a na-eme ya ka ọ daba nꞌọkụ, ma ọ bụ na mmiri, ime ka ọ nwụọ. Ọ bụrụ na ọ dị ihe i nwere ike ime, biko meere anyị ebere, nyere anyị aka.”
Mgbe Jisọs hụrụ na igwe mmadụ ahụ na-agba ọsọ na-abịa nꞌebe ọ nọ, ọ baara mmụọ ọjọọ ahụ mba sị ya, “Gị mmụọ ọjọọ ntị ike na ịda ogbi, ana m enye gị iwu, site nꞌime nwanta a pụta! Abanyekwala nꞌime ya ọzọ!”
Mmụọ ọjọọ ahụ tiri mkpu akwa, nugharịa nwanta ahụ ọzọ, site nꞌime ya pụta. Nwanta ahụ dara tọgbọrọ nꞌala dị ka onye nwụrụ anwụ. Ndị nile nọ nꞌebe ahụ sịrị, “Ọ nwụọla!”
Emesịa, Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya siri nꞌebe ahụ pụọ. Mgbe ha batara nꞌụlọ ebe ha na-anọ, ndị na-eso ụzọ ya jụrụ ya na nzuzo sị ya, “Gịnị mere o jiri siere anyị ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ ahụ?”
Jisọs zara sị ha, “Ọ bụ nanị site nꞌike ekpere ka a pụrụ ịchụpụ ụdị mmụọ ọjọọ ahụ.”
Jọn, otu nꞌime ndị na-eso ụzọ ya gwara Jisọs sị ya, “Onye ozizi, anyị hụrụ otu onye ji aha gị na-achụpụ mmụọ ọjọọ ma anyị kwụsịrị ya, nꞌihi na ọ bụghị otu nꞌime ndị na-eso anyị.”
“Ọ bụrụ na ụkwụ gị emee ka i mehie gbupụ ya tụfuo, nꞌihi na ọ kara gị mma ịbụ onye ụkwụ rụrụ karịa na ị ga-abụ onye nwezuru ụkwụ ya abụọ e tinyekọtaa gị na ha nꞌọkụ ala mmụọ.
“Ọ bụrụkwa na anya gị emee ka i mehie, ghụpụ ya tụfuo ya. Ọ dịrị gị mma na i ji otu anya dịrị ndụ ruo mgbe ebighị ebi nꞌalaeze Chineke, karịa na i ga-enwe anya abụọ a tụba gị nꞌọkụ ala mmụọ, ebe a na-adịghị emenyụ ọkụ ahụ emenyụ.
Nꞌihi na mgbe ụmụnne asaa ahụ ga-esi nꞌọnwụ bilie, ha agaghị alụkwa di na nwụnye, nꞌihi na ha ga-adị ka ndị mmụọ ozi nọ nꞌeluigwe.
Devidi nꞌonwe ya sitere nꞌike Mmụọ Nsọ kwuo sị, ‘Chineke gwara Onyenwe m okwu sị ya, nọdụ nꞌakụkụ m tutuu ruo mgbe m mere ka ndị iro gị bụụrụ gị ihe ịtụkwasị ụkwụ.’
Ma mgbe ha jidere unu kpụta unu nꞌụlọ ikpe, unu echegbula onwe unu banyere ihe unu ga-ekwu iji sara ọnụ unu. Kama gwanụ ha ihe ọ bụla Chineke tinyere nꞌọnụ unu ikwu nꞌoge ahụ. Nꞌihi na ọ bụghị unu ga-ekwu okwu, kama ọ bụ Mmụọ Nsọ ga-esite nꞌọnụ unu kwuo okwu.
Mgbe ahụ ka m ga-ezipụ ndị mmụọ ozi m ka ha gaa kpọkọtaa ndị nile a họpụtara site nꞌakụkụ nile nke ụwa, site nꞌotu nsọtụ ruo na nsọtụ nke ọzọ.
“O nweghị onye ọ bụla maara ụbọchị ihe ndị a ga-eme, ma ọ bụ oge ha ga-emezu. Ndị mmụọ ozi amaghị, Nwa nke mmadụ amakwaghị. Ọ bụ nanị Nna m maara.
Nọọnụ na nche, na-ekpekwanụ ekpere ka unu hapụ ịdaba nꞌọnwụnwa. Ọ na-agụ mmụọ m agụụ ime ihe Chineke chọrọ, ma anụ ahụ adịghị ike.”
Nꞌụbọchị mbụ nꞌizu ụka, mgbe Jisọs si nꞌọnwụ bilie, onye mbụ o gosiri onwe ya bụ Meri Magdalin, nwanyị ahụ o sitere nꞌahụ ya chụpụ mmụọ ọjọọ asaa.
“Ndị kweere ga-enwekwa ihe iriba ama a ga-egosi okwukwe ha. Ha ga-esite nꞌaha m chụpụ mmụọ ọjọọ. Ha ga-ekwukwa okwu nꞌasụsụ ọhụrụ dị iche iche.
Ma mmụọ ozi ahụ gwara ya okwu sị, “Zakaraya, atụla egwu! Nꞌihi na abịara m ịgwa gị na Chineke anụla ekpere gị. Ọ ga-emekwa ka Elizabet nwụnye gị tụrụ ime, mụtara gị nwa nwoke, onye ị ga-akpọ aha ya Jọn.
Nꞌihi na nwanta ahụ ga-abụ onye dị ukwuu nꞌanya Chineke. Ọ gaghị emetụ mmanya ọ bụla aka, ọ gaghị aṅụkwa mmanya na-egbu egbu, nꞌihi na site nꞌafọ nne ya, Chineke ga-emejupụta ya na Mmụọ Nsọ.
Dị ka Ịlaija siri bụrụ nwoke dị ike, na onye jupụtara na Mmụọ Nsọ, otu a ka Jọn ga-adị. Ọ bụ ya ga-aga nꞌihu Onye nzọpụta ahụ na-abịa, kwadoo ndị mmadụ ịnabata Onyenwe anyị. Jọn ga-emekwa ka udo dịrị nꞌetiti ndị nna na ụmụ ha, ọ ga-akpọghachitekwa ndị na-enupụ isi mee ka ha bụrụ ndị ga-eche uche dị ka ndị ezi omume.”
Zakaraya jụrụ mmụọ ozi ahụ ajụjụ sị ya, “Olee otu m ga-esi mata na ihe ị gwara m bụ eziokwu? Ị hụlanụ na abụrụla m agadi nwụnye m bụkwa agadi.”
Mgbe ahụ mmụọ ozi ahụ zara ya sị, “Aha m bụ Geburel. Ọ bụ nꞌihu Chineke, onye zitere m iwetara gị akụkọ ọma a ka m na-anọ ụbọchị nile.
Mmụọ ozi ahụ bịakwutere nwagbọghọ ahụ sị ya, “Nwagbọghọ, ekele! Gị onye ihuọma Onyenwe anyị dịkwasịrị. Chineke nọnyekwaara gị!”
Ma mmụọ ozi ahụ sịrị ya, “Atụla egwu, nꞌihi na Chineke ekpebiela imere gị ihe ọma!
Meri jụrụ mmụọ ozi ahụ ajụjụ sị, “Ebe m na-enweghị di, aga m esikwanụ aṅaa mụta nwa?”
Mgbe Elizabet nụrụ ekele Meri, nwa ahụ ọ dị ime ya megharịrị ahụ. Mgbe ahụ kwa e mere ka Elizabet jupụta na Mmụọ Nsọ.
Mgbe ahụ kwa e mere ka Zakaraya jupụta na Mmụọ Nsọ. O buru amụma kwuo sị,
Nwanta ahụ toro bụrụ onye dị ike nꞌime mmụọ. O biri nanị ya nꞌime ọzara tutuu oge ahụ eruo mgbe ọ ga-ebido ọrụ ya nꞌetiti ụmụ Izirel.
Na mberede, ndị ọzụzụ atụrụ a hụrụ mmụọ ozi Onyenwe anyị ka ọ bịara guzo nꞌihu ha. Ebube Chineke gbakwara ha gburugburu mee ka ìhè jupụta nꞌebe ahụ ha nọ dị ka a ga-asị na ọ bụkwaghị abalị. Oke egwu tụrụ ndị ọzụzụ atụrụ ahụ.
Ma mmụọ ozi ahụ gwara ha okwu sị ha, “Unu atụla egwu nìhi na ewtaara m unu ozi oma nke na-eweta oke ọṅụ, bụ ọṅụ ga-adịrị mmadụ nile.
Mgbe mmụọ ozi a kpụ okwu ndị a nꞌọnụ na-ekwu, na mberede, igwe mmụọ ozi pụtara soro mmụọ ozi a, ee, ọtụtụ igwe mmụọ ozi nke eluigwe pụtara, soro mmụọ ozi a bido ịbụ abụ na ito Chineke na-asị,
Mgbe ndị mmụọ ozi a laghachiri nꞌeluigwe, ndị ọzụzụ atụrụ sịrịtara onwe ha, “Bịanụ ka anyị jeruo Betilehem, ka anyị jiri anya anyị hụ ihe ndị a dị egwu nke Onyenwe anyị gwara anyị site nꞌọnụ mmụọ ozi.”
Mgbe ha kelesịrị ya, ha pụrụ kọọrọ onye ọ bụla ha hụrụ ihe mmụọ ozi ahụ gwara ha banyere nwanta a.
Nꞌikpeazụ, ndị ọzụzụ atụrụ ahụ laghachiri azụ nꞌebe igwe atụrụ ha nọ. Mgbe ha na-aga, ha na-eto Chineke nꞌihi ihe ha nụrụ, na nꞌihi ihe ha hụkwara. Nꞌihi na ihe nile ha hụrụ dị, dị ka mmụọ ozi ahụ gwara ha.
Nꞌụbọchị nke asatọ ya, mgbe oge ruru ibi nwanta ahụ ugwu, ha gụkwara ya aha. Aha ha nyere ya bụ Jisọs, aha ahụ mmụọ ozi sị na a ga-akpọ ya tupuu Meri adịrị ime.
Ma Mmụọ Nsọ Chineke mere ka Simiọn mata na ọ gaghị anwụ tutuu ruo mgbe ọ hụrụ Onye nzọpụta ahụ Chineke kwere nkwa izite.
Nꞌụbọchị ahụ Meri na Josef kuuru Jisọs bịa nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ, imere ya ihe iwu kwuru, Mmụọ Nsọ kwalikwara Simiọn, mee ya ka ọ bịa nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ.
Nꞌihi nke a, Jọn gwara ha sị, “Eji m mmiri efu na-eme unu baptizim, ma ọ dị otu onye dị ukwuu karịa m, onye ga-abịa na mgbe na-adịghị anya. Ọ dị nnọọ ukwuu karịa m, nꞌihi na etozughị m ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji Mmụọ Nzọ na ọkụ mee unu baptizim.
Mmụọ Nsọ sikwa nꞌelu rịdata dị ka nduru, bekwasị Jisọs nꞌisi. Nꞌotu oge ahụ olu sitere nꞌelu daa sị, “Ị bụ Ọkpara m, onye m hụrụ nꞌanya. Ihe nile banyere gị na-atọ m ụtọ.”
Jisọs chụpụkwara ọtụtụ mmụọ ọjọọ site nꞌime ndị ha na-esogbu.
Mgbe ahụ, ndị ozi ahụ Jọn zitere nọ nꞌebe ahụ Jisọs nọ hụ ka Jisọs siri gwọọ ọtụtụ ndị ọrịa, hụkwa ka o si chụpụ ọtụtụ mmụọ ọjọọ. Ha hụkwara ka o si mee ka ndị kpuru ìsì hụ ụzọ ọzọ.
Ụmụ nwanyị ụfọdụ ndị a Jisọs gwọrọ ọrịa na-enye ha nsogbu, onye dị ka Meri Magdalin onye o sitere nꞌime ya chụpụ mmụọ ọjọọ asaa,
Mgbe Jisọs si nꞌugbọ mmiri na-arịpụta onye zutere ya bụ otu nwoke obodo ahụ mmụọ ọjọọ bi nꞌime ya. Ọ gba ọtọ. O bighị nꞌụlọ ọ bụla, kama ebe o jiri mere ụlọ ya bụ ebe a na-eli ozu.
Nwoke a si otu a kwuo okwu nꞌihi na Jisọs enyela mmụọ ọjọọ ahụ bi nꞌime ya iwu ka o site nꞌime ya pụta. Ọ dị mgbe mmụọ ọjọọ a na-ejidesi ya ike. Nꞌoge a, ọ bụrụ na e jiri ụdọ igwe kee ya aka na ụkwụ, tinye ya nꞌụlọ mkpọrọ, mmụọ ọjọọ a na-enyere ya akạ ịdọbisi ụdọ igwe ahụ. Ọ na-enyekwara ya aka isi nꞌụlọ mkpọrọ ahụ tikapụta. Ọ pụtakwa, ọ na-eduru ya gaa nꞌọzara.
Mgbe ahụ mmụọ ọjọọ ndị ahụ rịọrọ Jisọs ka ọ ghara inye ha iwu ka ha banye nꞌolulu dị omimi ahụ nke na-enweghị njedebe.
Nꞌoge ahụ, ọ dị igwe ezi nọ nꞌakụkụ ugwu dị ebe ahụ nso na-akpa nri. Mmụọ ọjọọ ndị a rịọrọ Jisọs ka o nye ha ike ka ha banye nꞌime ezi ndị ahụ. Jisọs nyere ha ike.
Mmụọ ọjọọ ndị ahụ sitere nꞌime nwoke ahụ pụọ, banye nꞌime ezi ndị ahụ. Otu mgbe ahụ ha banyere, igwe ezi ahụ nile sitere na mkputamkpu ala ọnụ mmiri ahụ gbara ọsọ dabanyechaa nꞌime mmiri ahụ, ebe osimiri riri ha.
Ọtụtụ mmadụ sitere nꞌobodo ndị a pụta, ka ha jiri anya ha hụ ihe mere. Mgbe ha bịara nꞌebe Jisọs nọ, ha hụrụ nwoke ahụ e si nꞌime ya chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ. Ọ nọ ala nꞌakụkụ ebe ụkwụ Jisọs dị. O yi uwe, nọdụkwa nꞌanya udo. Ụjọ tụrụ ndị mmadụ ahụ nile.
Ndị nọ nꞌebe ahụ mgbe Jisọs chụpụrụ mmụọ ọjọ ndị ahụ, kọọrọ ndị si nꞌime obodo pụta otu Jisọs siri gwọọ nwoke ahụ.
Mgbe Jisọs na-abanye nꞌụgbọ, nwoke ahụ o sitere nꞌime ya chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ, bịara rịọ ya sị, “Biko kwerenụ ka m soro gị.” Ma Jisọs ekweghi. Kama ọ gwara ya sị,
Mmụọ ya lọghachiri ọzọ. O bilitekwara. Jisọs gwara ndị mụrụ ya ka ha chọọrọ ya nri ka o rie.
Mgbe ahụ Jisọs kpọrọ mmadụ iri na abụọ ahụ na-eso ụzọ ya nye ya ike ịchụpụ mmụọ ọjọọ, na ike ịgwọ ọrịa nile.
“Nꞌihi na onye ọ bụla ihere m ma ọ bụ ihere okwu m na-eme, ka ihere ya ga-emekwa m mgbe m ga-abịaghachi nꞌebube nke Nna m, na nꞌebube ndị mmụọ ozi.
Mmụọ ọjọọ na-abịa jide ya na-eme ka ọ na-eti mkpu. Ọ na-enugharịkwa ya na-eme ka ọ na-agbọ ụfụfụ nꞌọnụ. Mgbe mmụọ ọjọọ a mesịrị nke a laa, ike afụ anaghị adịkwa nwanta a.
Abịakwutere m ndị na-eso ụzọ gị rịọ ha ka ha chụpụ mmụọ ọjọọ ahụ, ma ha enweghị ike.”
Mgbe nna nwanta ahụ du nwanta ahụ na-abịa, mmụọ ọjọọ ahụ kwaturu ya nꞌala nugharịa ya. Ma Jisọs nyere mmụọ ọjọọ ahụ iwu ka o si nꞌime nwanta ahụ pụta. Ọ gwọrọ nwanta ahụ kpọnyekwa ya nna ya.
Mgbe ahụ Jọn gwara ya sị, “Nna anyị ukwu, anyụ hụrụ otu nwoke ka o ji aha gị na-achụpụ mmụọ ọjọọ. Ebe ọ na-esoghị nꞌotu anyị, anyị kwụsịrị ya.”
Ma Jisọs zara ya sị, “Hapụ ndị nwụrụ anwụ nꞌime mmụọ ha ka ha lie ndị dị ka ha. Ọrụ gị bụ ịga gbasaa ozi ọma nke alaeze Chineke.”
Ma gị obodo Kapanọm! Ị̀ na-eche na a ga-ebuli gị elu ruo eluigwe? Mba! Ị ga-arịdaru ala mmụọ!”
Emesịa, iri mmadụ asaa ahụ Jisọs zipụrụ jiri ọṅụ lọta gwa Jisọs sị, “Onyenwe anyị, ọ bụladị mmụọ ọjọọ rubeere anyị isi mgbe anyị sitere nꞌaha gị nye ha iwu ka ha pụta.”
Otu ọ dị, unu aṅụrịla ọṅụ nꞌihi na mmụọ ọjọọ rubere isi mee ihe unu nyere ha nꞌiwu, kama ṅụrịanụ ọṅụ nꞌihi na e deela aha unu nꞌeluigwe.”
Mgbe ahụ, Jisọs, onye jupụtara nꞌọṅụ nke Mmụọ Nsọ kwuru okwu sị, “Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, ekelee m gị nꞌihi na i zonarịrị ihe ndị a nꞌebe ndị ọkachamara na ndị ukwu nwere amamihe nọ, ma ị kpughere ihe ndị a nile nye ndị na-amaghị ihe ọ bụla. Ee, Nna, ọ bụ gị siri otu a mee ya, nꞌihi na otu ahụ bụ ụzọ i siri chọọ ya.
Otu ụbọchị mgbe Jisọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ bi nꞌime otu nwoke dara ogbi, nwoke ahụ bidoro ikwu okwu. Ọrụ a jụrụ mmadụ nile anya.
Ma ụfọdụ mmadụ nꞌime ndị nọ ebe ahụ kwuru sị, “Ọ bụ site nꞌike ekwensu, eze ndị mmụọ ọjọọ ka o si achụpụ mmụọ ọjọọ ndị a.”
Ma ọ bụrụ na m na-esite nꞌike Chineke nyere m na-achụpụ mmụọ ọjọọ, ọ bụ nke a ga-egosi unu na alaeze Chineke abịarutela nꞌebe unu nọ.
Mgbe ahụ mmụọ ọjọọ ahụ na-apụ ga chọta mmụọ ọjọọ asaa ọzọ ndị dị njọ karịa ya. Ha nile ga-abata bịa biri nꞌime nwoke ahụ, mee ka ọnọdụ ya dị njọ karịa ka ọ dị na mbụ.”
Ma ka m gwa unu onye unu kwesịrị ịtụ egwu. Tụọnụ egwu Chineke, onye nwere ike igbu mmadụ tụnyekwa ya ala mmụọ.
“Ka m gwa unu eziokwu, onye ọ bụla kwuwapụtara nꞌihu ndị mmadụ na ya bụ onye na-eso m, ya ka m ga-ekwukwa okwu banyere nꞌihu ndị mmụọ ozi Chineke na ọ bụ onye dinyeere m.
Ọ bụrụkwa na mmadụ ọ bụla agọnarị m nꞌihu ndị mmadụ, mụ onwe m ga-agọnarịkwa ya nꞌihu ndị mmụọ ozi Chineke. Aga m asị, amaghị m onye ọ bụ.
Onye ọ bụla kwujọrọ mụ bụ Nwa nke mmadụ ga-enweta mgbaghara, ma onye ọ bụla kwujọrọ Mmụọ Nsọ Chineke agaghị anata mgbaghara.
Nꞌihi na ọ bụ Mmụọ Nsọ ga-etinye okwu unu ga-ekwu nꞌọnụ unu mgbe unu guzoro nꞌihu ha.”
Nꞌime ụlọ ahụ, o nwere otu nwanyị bịara, nke mmụọ ọjọọ bi nꞌime ya. Mmụọ ọjọọ a emeela ka nwanyị a nọọ nꞌọrịa afọ iri na asatọ. Kemgbe oge ahụ, nwanyị a na-ehu ehu mgbe ọ bụla ọ na-aga ije, o nweghị ike iguzo kwem.
Ma Jisọs zara ha sị, “Gaanụ gwa anụ ụrụ ahụ na m kwuru sị, na taa na echi, aga m anọgide na-arụ ọrụ m na-arụ ịchụpụ mmụọ ọjọọ na ịgwọ ndị ọrịa. Gwakwanụ ya na nwanne echi aga m arụcha ọrụ m.
Nꞌụzọ dị otu a kwa, ndị mmụọ ozi na-ejere Chineke ozi nꞌeluigwe na-aṅụrị ọṅụ mgbe otu onye mmehie chegharịrị.”
Jisọs tiri mkpu nꞌoke olu sị, “Nna, ọ bụ nꞌaka gị ka m na-etinye mmụọ m.” Mgbe o kwusịrị okwu a, o kubiri ume.
lọta kọọrọ anyị na ha ahụghị ozu ya. Ha gwakwara anyị na ha hụrụ ndị mmụọ ozi ndị gwara ha na Jisọs dị ndụ!
Mgbe ha hụrụ ya, ụjọ dị ukwuu tụrụ ha, nꞌihi na ha chere na ọ bụ mmụọ ka ha hụrụ.
Leenụ anya nꞌaka m! Leekwanụ anya nꞌụkwụ m! Ọ bụ mụ onwe m ka unu na-ahụ. Metụnụ m aka chọpụtanụ ihe m bụ nꞌonwe unu, nꞌihi na mmụọ adịghị enwe anụ ahụ dị ka m nwere.”
“Ma nọdụnụ nꞌobodo Jerusalem a tutuu Mmụọ Nsọ abịa mejupụta unu nꞌike. Nꞌihi na aga m ezite ya ka ọ bịakwasị unu dị ka Nna m kwere nkwa ime.”
Nke a bụ ama Jọn gbara: “Ahụrụ m ka eluigwe meghere, hụkwa Mmụọ Nsọ ka ọ rịdatara dị ka nduru bekwasị nwoke a nꞌisi.
“Ma amaghị m onye nwoke a bụ. Kama Chineke, onye zitere m ime ndị mmadụ baptizim ebe a, gwara m sị, ‘Onye ahụ Mmụọ Nsọ ga-ebekwasị nꞌisi, bụ onye ahụ unu na-ele anya ya. Ọ bụkwa onye ndị mmadụ ga-esite nꞌaka ya nata Mmụọ Nsọ.’
Ị ga-ahụ ka eluigwe meghere, hụkwa ndị mmụọ ozi Chineke ka ha na-arigo naarịdatakwa ịbịakwute m bụ Onye nzọpụta.”
Ma Jisọs sịrị ya, “Lee anya ka m gwa gị, ọ bụrụ na amụghị mmadụ site na mmiri na Mmụọ Nsọ, onye ahụ enweghị ike ịba nꞌalaeze Chineke.
Dị ka mmadụ nwere ike mụọ mmadụ ibe ya, otu a kwa, ọ bụ nanị Mmụọ Nsọ pụrụ ịmụ mmadụ nꞌime Mmụọ Nsọ.
Dị ka ifufe si efegharị nꞌebe ọ bụla ọ chọrọ, ị na-anụkwa ka ọ na-eme mkpọtụ, ma ị mataghị ebe o si bịa ma ọ bụ ebe ọ na-aga, nꞌụzọ dị otu a, i nweghị ike ịmata otu Mmụọ Nsọ si amụ mmadụ ọzọ.”
Nꞌihi na onye ọ bụla Chineke zitere na-ekwu okwu nke Chineke. Nꞌihi na onye ahụ naejupụta na Mmụọ nsọ Chineke.
Nꞌihi na mmụọ ozi Onyenwe anyị na-abịa na mmiri ahụ gbarụọ ya. Mgbe mmiri a gbarụrụ, onye ọrịa ọ bụla buru ụzọ baa nꞌime ya ka a na-eme ka ahụ dị mma.
Ọ bụ nanị Mmụọ Nsọ na-enye ndụ, ike mmadụ abaghị uru ọ bụla. Okwu ndị a nile m gwara unu bụ Mmụọ na ndụ.
(Jisọs na-ekwu okwu banyere Mmụọ Nsọ nke ndị kweere na ya ga-anata. Nꞌoge ahụ Mmụọ Nsọ abịabeghị nꞌihi na Jisọs alaghachibeghị nꞌebube ya nꞌeluigwe).
Ndị isi ndị Juu sịrị ya, “Nke a bụ nnọọ ihe anyị kwuru na ị bụ onye obodo ọzọ. Ọ pụtara ìhè ugbu a na mmụọ ọjọọ bi nꞌime gị na-achịkwa gị.”
Jisọs zara sị ha, “Mmụọ ọjọọ ọ bụla adịghị nꞌime m, kama unu amaghị onye m bụ. Ọ bụ Nna m ka m na-enye otuto.
Igwe ndị mmadụ guzo nꞌebe ahụ, ndị nụrụ olu ahụ kwuru sị, “Ọ bụ egbe eluigwe.” Ụfọdụ sịrị, “Ọ bụ mmụọ ozi na-agwa ya okwu.”
Mgbe Jisọs kwusịrị okwu a, o nweghị udo nꞌime mmụọ ya. Ọ gwara ha sị, “Nꞌezie, otu onye nꞌime unu ga-arara m nye.”
Ma Onye nkasịobị ahụ bụ Mmụọ Nsọ, onye Nna m ga-ezite nꞌaha m, ga-ezi unu ihe nile. Ọ gaechetara unu ihe nile m gwara unu.
“Ma Onye ndụmọdụ ahụ ga-abịa, Onye ahụ bụ Mmụọ eziokwu ahụ, Onye ga-esite nꞌebe Nna m nọ bịa. Mgbe ọ bịara, ọ ga-akọwara unu ihe nile banyere m.
Mgbe mụ na ha nọ nꞌụwa echebere m ha site nꞌaha gị nke i nyere m. O nwekwaghị onye ọ bụla nꞌime ha lara nꞌiyi, karịakwa onye ahụ bụ nwa ọkụ ala mmụọ, dị ka akwụkwọ nsọ siri gbaa ama banyere ya.
Ọ hụrụ ndị mmụọ ozi abụọ yi uwe ọcha. Otu nọdụrụ ala nꞌebe ụkwụ Jisọs dị mgbe ọ tọgbọ nꞌili ahụ. Nke ọzọ nọdụkwara ebe isi ya dị.
Ndị mmụọ ozi ahụ jụrụ Meri ajụjụ sị ya, “Gịnị mere i ji akwa akwa?” Meri zara ha sị, “Ọ bụ nꞌihi na ha ebupụla Onyenwe m, amaghị m ebe ha bujere ya.”
Mgbe ahụ o kusara ha ume sị ha, “Natanụ Mmụọ Nsọ.
ỌLU OZI 1:2
Agwakwara m gị otu o siri laghachi nꞌeluigwe mgbe o nyesịrị ndị na-eso ụzọ ya ndụmọdụ site nꞌike Mmụọ Nsọ. Ndị ahụ bụ ndị na-eso ụzọ ya ọ họpụtara.
ỌLU OZI 1:5
Jisọs gwakwara ha sị, “Ọ bụ ezie na Jọn ji mmiri mee unu baptizim, ma tupuu abali ole na ole agafee, a ga-eji Mmụọ Nsọ mee unu baptizim.”
ỌLU OZI 1:8
Ma mgbe Mmụọ Nsọ bịakwasịrị unu, unu ga-anata ike. Mgbe ahụ unu ga-agwa ndị mmadụ nọ na Jerusalem, na Judia, na Sameria, na mmadụ nile nọ na nsọtụ ụwa nile, ihe banyere m.”
ỌLU OZI 1:16
“Ụmụnna m, ọ dị mkpa ka ihe e dere nꞌakwụkwọ nsọ mezuo banyere Judas onye duuru ndị jidere Jisọs bịa. Mmụọ Nsọ kwuru na nke a ga-eme mgbe o sitere nꞌọnụ Devidi kwuo okwu nꞌoge gara aga.
ỌLU OZI 2:4
E mekwara ka ha jupụta na Mmụọ Nsọ, malite ịsụ asụsụ dị iche iche. Onye ọ bụla sụrụ asụsụ ọ bụla Mmụọ Nsọ nyere ya ike ịsụ.
Nꞌihi na Joel buru amụma sị, ‘Nꞌoge ikpeazụ, nke a bụ ihe na-aghaghị ime, dị ka Onyenwe anyị kwuru. Aga m awụkwasị mmadụ nile Mmụọ m. Nꞌoge ahụ ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom ga-ebu amụma. Ndị okorọbịa unu ga-ahụ ọhụ. Ndị okenye nꞌetiti unu ga-arọkwa nrọ.
ỌLU OZI 2:18
Ndị bụ ohu nꞌetiti unu, nwoke ha na nwanyị nꞌime ha, ka m ga-awụkwasị Mmụọ m. Ha ga-ebukwa amụma.
ỌLU OZI 2:33
“Ugbu a, e buliela Jisọs elu. Ọ nọdụrụ nꞌakụkụ Chineke nꞌocheeze ya nꞌeluigwe. Ọ natala nkwa nke Mmụọ Nsọ, site nꞌaka Chineke. Ugbu a ọ na-awụsịkwa ike Mmụọ Nsọ ahụ. Unu onwe unu bụkwa ndị akaebe na nke a bụ eziokwu.
ỌLU OZI 3:20
Onyenwe anyị ga-emekwa ka agbamume nke ime mmụọ rute unu aka. Ọ ga-ezitekwara unu Jisọs Onye nzọpụta ahụ unu na-ele anya ya.
ỌLU OZI 4:8
Nꞌoge ahụ, Pita jupụtara na Mmụọ Nsọ. Ọ gwara ha sị, “Unu ndị na-achị achị, na ndị okenye ala anyị.
ỌLU OZI 4:25
Ọ bụ gị mere ka Mmụọ Nsọ kwuo okwu site nꞌọnụ Devidi sị, ‘Gịnị mere mba nile ji na-agbọ ụfụfụ? Gịnị mere ha ji ezube nzube nzuzu imegide gị, Chineke?
ỌLU OZI 4:31
Mgbe ha kpesịrị ekpere, ụlọ ahụ ha zukọrọ nꞌime ya mara jijiji. Ha nile jupụtakwara na Mmụọ Nsọ. Ha gakwara nꞌihu ikwusa ozi ọma Chineke na-atụghị ụjọ.
ỌLU OZI 5:9
Pita sịrị ya, “Gịnị mere gị na di gị ji gbakọọ izu ịkpasu Mmụọ Nsọ iwe? Gee ntị! Nzọ ụkwụ ị na-anụ bụ nzọ ụkwụ ụmụ okorọbịa liri di gị. Ha ga-ebupụkwa gị!”
ỌLU OZI 5:16
Igwe mmadụ zukọrọ site nꞌobodo dị Jerusalem gburugburu. Ha butekwara ndị na-arịa ọrịa, na ndị mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu. Ndị ozi mekwara ka ahụ dị ha mma.
ỌLU OZI 5:19
Ma nꞌabalị ahụ, Onyenwe anyị zitere mmụọ ozi ya. Mmụọ ozi ahụ meghere ụzọ ụlọ mkpọrọ ahụ, dupụta ndị ozi ahụ, gwa ha okwu sị,
ỌLU OZI 5:21
Ndị ozi ahụ pụrụ dị ka mmụọ ozi gwara ha. Nꞌisi ụtụtụ ha banyere nꞌụlọ nso ukwu Chineke bido izi ihe. Mgbe e mesịrị, onyeisi nchụaja na ndị enyi ya, batara nꞌụlọ nzukọ ha. Onyeisi nchụaja kpọrọ nzukọ ndị na-achị achị. Ndị bịara nzukọ a bụ ndị okenye ndị Juu, ndị na-anọchite anya ụmụ Izirel nile. Mgbe ha zukọrọ, onyeisi nchụaja ziri ndị uwe ojii ka ha gaa kpụta ndị ozi site nꞌụlọ mkpọrọ.
ỌLU OZI 5:32
Anyị na-agbakwa ama na ihe ndị a bụ eziokwu. Otu a kwa, Mmụọ Nsọ, onye Chineke nyere ndị na-erubere ya isi, na-agbakwa ama.”
ỌLU OZI 6:10
Ma Stivin maara ihe nke ukwuu, bụrụkwa onye jupụtara na Mmụọ Nsọ. Ya mere, ndị Juu a enweghị ike imegide ya.
ỌLU OZI 6:15
Ndị nile nọ nꞌụlọ ikpe ahụ legidere Stivin anya. Ha hụrụ ihu ya ka ọ na-enwụ dị ka ihu mmụọ ozi.
ỌLU OZI 7:30
“Mgbe iri afọ anọ ọzọ gafere, mmụọ ozi Onyenwe anyị gosiri Mosisi onwe ya nꞌọzara dị ugwu Saịnaị gburugburu. Mmụọ ozi a bịakwutere Mosisi nꞌime ire ọkụ na-ere nꞌotu osisi.
ỌLU OZI 7:35
Mosisi a m na-ekwu ihe banyere ya bụ otu Mosisi ahụ ụmụnna ya jụrụ nꞌala Ijipti. Ee, ọ bụ otu Mosisi ahụ ha jụrụ ajụjụ sị, ‘Ònye mere gị onyeisi na onye ikpe nꞌebe anyị nọ?’ Ọ bụkwa Mosisi a ka Chineke zigara ịzọpụta na ịchị ndị ya. Chineke nyekwara Mosisi ike ime nke a site nꞌọnụ mmụọ ozi ahụ gwara ya okwu nꞌime ọkụ ahụ na-enwụ nꞌosisi ahụ dị nꞌọzara.
ỌLU OZI 7:38
Ọ bụkwa otu Mosisi a bụ onye kwuchitere ọnụ nna nna anyị ha nꞌihu mmụọ ozi ahụ, nꞌugwu Saịnaị, mgbe mmụọ ozi ahụ nyere ha iwu Chineke.
ỌLU OZI 7:53
Karịsịa, ọ dịbeghị oge unu ji rube isi nꞌiwu Chineke, iwu ahụ mmụọ ozi ya wetaara unu!”
Mgbe ndị isi Juu nụrụ ihe ndị a, o wutere mmụọ ha. Ha tara ikikere eze nꞌiwe na nꞌọnụ ma.
ỌLU OZI 7:55
Ma Stivin, nꞌihi na o jupụtara na Mmụọ Nsọ, lere anya nꞌeluigwe hụ ebube Chineke. Ọ hụkwara Jisọs ka o guzoro nꞌaka nri Chineke.
ỌLU OZI 7:59
Mgbe ha na-atụ Stivin nkume ahụ, o kpere ekpere sị, “Onyenwe anyị Jisọs, nara mmụọ m.”
ỌLU OZI 8:7
Nꞌihi na site nꞌọrụ ebube ndị a, mmụọ ọjọọ pụrụ site na ndụ ndị ụfọdụ. Mmụọ ọjọọ a pụtara na-eti mkpu. Ọtụtụ ndị ahụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ ka Filip gwọkwara. Ụfọdụ ndị ngwụrọ ka ọ gwọkwara.
Mgbe ha bịaruru, ha bidoro ikpe ekpere ka ndị a kwere ekwe nata Mmụọ Nsọ.
ỌLU OZI 8:16
Nꞌihi na tutuu ruo ugbu a, ha anatabeghị Mmụọ Nsọ. Ọ bụ nanị baptizim ka e mere ha baa nꞌaha Onyenwe anyị Jisọs.
ỌLU OZI 8:17
Mgbe Pita na Jọn bikwasịrị ndị a kwere ekwe aka nꞌisi, ha natara Mmụọ Nsọ.
ỌLU OZI 8:18
Mgbe Saimọn hụrụ na ndị a natara Mmụọ Nsọ nanị site nꞌaka ndị ozi bikwasịrị ha nꞌisi, o chere ha ego nꞌihu, rịọ ha sị,
ỌLU OZI 8:19
“Werenụ ego a, nyekwanụ m ike a. Ka onye ọ bụla m bikwasịrị aka nꞌisi nata Mmụọ Nsọ.”
ỌLU OZI 8:29
Mmụọ Nsọ gwara Filip okwu sị, “Gaa nso, nọọkwa ụgbọ ahụ nso.”
ỌLU OZI 9:17
Ananayas gara hụ Sọl dị ka Chineke nyere ya iwu. Ọ chọtakwara Sọl, bikwasị ya aka, gwa ya okwu sị ya, “Nwanna m Sọl, Onyenwe anyị Jisọs onye gosiri gị onwe ya nꞌụzọ, zitere m ka ị hụkwa ụzọ ọzọ, ma jupụtakwa na Mmụọ Nsọ.”
ỌLU OZI 10:3
Otụ ụbọchị, nꞌihe dị ka elekere atọ nke ehihie, ọ hụrụ ọhụ. Nꞌime ọhụ ahụ, ọ hụrụ mmụọ ozi Chineke ka ọ bịakwutere ya, kpọọ ya sị, “Kọniliọs!”
Ụjọ tụrụ Kọniliọs. O legidere mmụọ ozi ahụ anya jụọ ya sị, “Onyenwe anyị, ọ̀ bụ gịnị ka ị na-achọ?” Mmụọ ozi ahụ zara sị, “Chineke anụla ekpere gị. Ọ hụkwala, ma cheta ọrụ ọma gị nile.
ỌLU OZI 10:7
Mgbe mmụọ ozi ahụ lara, Kọniliọs kpọrọ mmadụ abụọ nꞌime ndị na-ejere ya ozi nꞌụlọ ya. Ọ kpọkwara otu nꞌime ndị agha na-eche ya nche. Onye agha a bụkwa onye na-atụ egwu Chineke.
ỌLU OZI 10:8
Kọniliọs kọọrọ ha ihe nile mmụọ ozi ahụ kwuru. Emesịa o zigara ha Jopa.
Ma Pita nọ rị na-atụgharị uche nꞌihe ọhụ ahụ ọ hụrụ ga-abụ. Nꞌoge a, Mmụọ Nsọ gwara Pita okwu sị, “Lee, mmadụ atọ guzo nꞌọnụ ụzọ ugbu a. Ha chọkwara ịhụ gị.
Ha zara sị ya, “Ọ bụ Kọniliọs onyeisi agha anyị zitere anyị. Nwoke a bụ ezi mmadụ, bụrụkwa onye na-atụ egwu Chineke. Ọ bụkwa onye ndị Juu nile na-asọpụrụ. Otu ụbọchị, mmụọ ozi bịakwutere ya, gwa ya ka o zie ozi kpọọ Pita ka ọ bịakwute ya. Na Pita bụ onye ga-eme ka Kọniliọs mata ihe nile Chineke chọrọ ka o mee.”
ỌLU OZI 10:38
Ana m echekwa na unu nile maara ihe banyere Jisọs onye Nazaret, Onye Chineke mejupụtara nꞌike Mmụọ Nsọ. O jegharịrị nꞌebe nile dị iche iche na-arụ ọrụ ebere, chụpụkwa mmụọ ọjọọ, nꞌihi na Chineke nọnyeere ya.
ỌLU OZI 10:44
Mgbe Saimọn Pita nọ na-ekwu okwu ndị a, Mmụọ Nsọ bịakwasịrị ndị nile na-ege ntị nꞌokwu ya.
Nke a juru ndị Juu ahụ sooro Pita bịa anya. Ọ gbakwara ha gharịị nke ukwuu otu Chineke si mee ka ndị mba ọzọ nata onyinye Mmụọ Nsọ ahụ.
ỌLU OZI 10:47
“Gịnị ọzọ dị nke ga-egbochi anyị ime ndị a baptizim? Ugbu a ha anatala Mmụọ Nsọ dị ka anyị onwe anyị bụ ndị Juu kwere ekwe si nata ya.”
ỌLU OZI 11:12
Mmụọ Nsọ gwara m okwu sị, ‘Soro ha gaa!’ Ma o mekwara ka m mata nke ọma na o kwesịghị ka o wute m na ha bụ ndị mba ọzọ. Mgbe na-adịghị anya, mụ onwe m na ụmụnna isii ndị a, ndị so m gaa Sizarịa, bịarutere nso nꞌụlọ Kọniliọs onye zipụrụ ndị ozi ahụ.
ỌLU OZI 11:13
Kọniliọs mere ka anyị mata otu mmụọ ozi siri bịakwute ya gwa ya ka o ziga ndị ozi ya ka ha gaa Jopa. Na ha ga-ahụkwa otu nwoke a na-akpọ Saimọn Pita.
ỌLU OZI 11:14
Mmụọ ozi ahụ gwakwara ya sị, ‘Pita ga-akọwara gị ihe nile banyere nzọpụta nke gị na nke ndị ezinụlọ gị nile.’
ỌLU OZI 11:15
“Nꞌihi ihe ndị a nile, mụ onwe m gwara ha ozi ọma Chineke. Mgbe m nọ na-ekwu okwu ahụ, Mmụọ Nsọ bịakwasịrị ha dị ka o siri bịakwasị anyị na mbụ.
ỌLU OZI 11:16
Mgbe ahụ echetara m okwu ahụ Onyenwe anyị kwuru sị, ‘Nꞌezie Jọn ga-eji mmiri mee unu baptizim, ma mụ onwe m ga-eji Mmụọ Nsọ mee unu baptizim.’
ỌLU OZI 11:17
Ebe anyị matara na Chineke nꞌonwe ya emeela ka ndị mba ọzọ nata onyinye Mmụọ Nsọ dị ka anyị si nata ya mgbe anyị kweere nꞌOnyenwe anyị Jisọs Kraịst, onye ka m bụ ịrụsị Chineke ụka?”
ỌLU OZI 11:18
Mgbe mmadụ nile nụrụ nkọwa dị otu a, ha mechiri ọnụ ha nye Chineke otuto sị, “Nꞌezie, Chineke enyela ndị mba ọzọ kweere nꞌOnyenwe anyị Jisọs Kraịst onyinye Mmụọ Nsọ.”
Banabas bụ nwoke jupụtara nꞌọrụ ebere na nꞌike Mmụọ Nsọ. O nwekwara okwukwe dị ebube, nꞌihi ya ọtụtụ mmadụ chegharịkwara bịakwute Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.
ỌLU OZI 11:28
Otu nwoke nꞌime ha a na-akpọ Agabus biliri ọtọ nꞌetiti nzukọ ahụ buo amụma site nꞌike Mmụọ Nsọ banyere oke ụnwụ ahụ ga-abịakwasị ụwa nile. Amụma a mezukwara nꞌoge Kladiọs chịrị dị ka eze ndị Rom nile.
ỌLU OZI 12:7
Na mberede, ìhè dị ukwuu nwụrụ nꞌime ụlọ mkpọrọ ahụ. Mmụọ ozi batara guzo nꞌakụkụ Pita metụ ya aka. Pita tetara nꞌụra. Ọ nụrụ ka mmụọ ozi ahụ sịrị ya, “Pita! Bilie ngwangwa!” Nꞌotu oge ahụ, eriri igwe ahụ dapụrụ nꞌala.
ỌLU OZI 12:8
Mmụọ ozi ahụ gwara Pita okwu sị, “Kee ihe okike nꞌukwu gi, yirikwa akpụkpọ ụkwụ gị.” Pita mere otu ahụ. Mmụọ ozi ahụ sịkwa ya, “Yirikwa uwe ukwu gi, sokwa m nꞌazu.”
ỌLU OZI 12:9
Pita sooro mmụọ ozi ahụ nꞌazụ site nꞌụlọ mkpọrọ ahụ pụta. Ma Pita chere na ihe ndị a na-eme na nrọ, ma ọ bụ na ọ bụ ọhụ ka ọ na-ahụ. O kwenyeghị na ihe ndị a nile pụrụ imezu. O jukwara ya anya nke ukwuu.
ỌLU OZI 12:10
Ha pụtara site nꞌime ụlọ mkpọrọ ahụ. Ọ dịghị anya, ha bịaruru nꞌogige e ji igwe wuo. Ụzọ dị nꞌebe ahụ meghekwara nꞌonwe ya. Mmụọ ozi ahụ jidekwara Pita nꞌaka tutuu ruo mgbe ha gafesịrị ọnụ ụzọ nile nke ụlọ mkpọrọ ahụ. Mgbe ha pụtara nꞌezi, mmụọ ozi ahụ hapụrụ Pita aka. Pita ahụkwaghị ya anya ọzọ.
ỌLU OZI 12:11
Mgbe ahụ kwa ka Pita ghọtara ihe nile mere. O kwuru sị, “Nꞌezie, Onyenwe anyị ezitela mmụọ ozi ya ka ọ bịa napụta m site nꞌaka eze Herọd. Ugbu a ọ napụtakwala m site nꞌọchịchọ ọjọọ nile nke ndị Juu.”
ỌLU OZI 12:17
Ma Pita feere ha aka ka ha jiri nwayọọ kwuo okwu. Ọ kọọrọ ha ihe nile Onyenwe anyị mere site nꞌaka mmụọ ozi ya. Nꞌikpeazụ, Pita gwara ha sị, “Meenụ ka Jemes na ụmụnna anyị nile mata ihe ndị a.” Ọ hapụrụ ha gaa nꞌebe ọzọ.
ỌLU OZI 12:23
Nꞌotu oge ahụ, mmụọ ozi Onyenwe anyị tiri Herọd ihe otiti dị egwu. Ikpuru jupụtakwara ya nꞌahụ, nke mere ka ọ nwụọ. Ma ihe ndị a nile dakwasịrị ya nꞌihi na Herọd naara ofufe ahụ e kwesịrị inye nanị Chineke, dị ka a ga-asị na ọ bụ Chineke nꞌonwe ya. O nyekwaghị Chineke otuto ma ọlị.
ỌLU OZI 13:2
Otu mgbe, ndị a zukọrọ ibu ọnụ na ikpe ekpere. Mmụọ Nsọ gwara ha okwu sị, “Kewapụnụ Banabas na Sọl ka ha nọdụ iche. Nꞌihi na enwere m ọrụ dị ukwuu ha ga-arụ nꞌaha m.”
ỌLU OZI 13:4
Mmụọ Nsọ duuru ha gaa obodo Selusia. Emesịa, ha sitere nꞌebe ahụ jeruo Saiprọs.
ỌLU OZI 13:7
Bajisọs bụkwa enyi ọchịagha obodo ahụ, onye a na-akpọ Sajiọs Pọlọs. Ha abụọ na-anọkọ oge nile. Ọchịagha ahụ nwere amamihe na mmụọ nke ịṅomi ihe. O ziri ozi ka a kpọọ Banabas na Sọl, nꞌihi na ọ chọrọ ịnụ okwu Chineke site nꞌọnụ ha.
ỌLU OZI 13:9
Ma Sọl, ebe o jupụtara nꞌike Mmụọ Nsọ, legidere onye mgbaasị ahụ anya nꞌoke iwe,
ỌLU OZI 13:52
Ndị kwere ekwe nile jupụtakwara nꞌọṅụ nꞌebe ahụ. Ha jupụtakwara nꞌike Mmụọ Nsọ.
ỌLU OZI 14:1
Nꞌobodo Aikoniọm, Pọl na Banabas banyekwara nꞌụlọ nzukọ ndị Juu, kwuo okwu Onyenwe anyị site nꞌike Mmụọ Nsọ. Ọtụtụ ndị Juu na ndị mba ọzọ chegharịkwara.
ỌLU OZI 15:28
“Nꞌihi na ọ bụ ihe ziri ezi nꞌanya Mmụọ Nsọ, na nꞌanya anyị kwa, na o kwesịghị ka anyị bokwasị unu ibu arọ banyere omenala ndị Juu.
ỌLU OZI 16:6
Mgbe ha si nꞌebe ahụ pụọ, ha gara nꞌobodo Frigia na Galetia. Ma Mmụọ Nsọ ekweghị ka ha kwusaa ozi ọma nꞌakụkụ Esia nꞌoge ahụ.
ỌLU OZI 16:7
Mgbe ha ruru nꞌakụkụ obodo Misia, ha chere ihu ịbanye nꞌakụkụ obodo Bitinia. Ma Mmụọ Nsọ Onyenwe anyị akwagideghị ka ha gaa.
Otu ụbọchị, mgbe anyị na-aga ikpe ekpere nꞌakụkụ ọnụ mmiri, anyị zutere otu nwagbọghọ onye mmụọ ọjọọ bi nꞌime ya. Ọ bụkwa ohu, na onye na-agba aja. Site nꞌụzọ dị otu a ọ na-ewetara ndị nwe ya ego dị ukwuu.
ỌLU OZI 16:18
Nwagbọghọ ahụ mere nke a ọtụtụ ụbọchị. Ma site nꞌoke iwe, Pọl baara mmụọ ọjọọ ahụ bi nꞌime ya mba sị, “Eji m aha Jisọs Kraịst na-enye gị iwu sị gị site nꞌime nwagbọghọ a pụta!” Otu mgbe ahụ mmụọ ọjọọ ahụ si nꞌime ya pụta.
ỌLU OZI 20:22
“Ma otu ọ dị, ana m aga Jerusalem dị ka iwu Mmụọ Nsọ nyere m si dị, ma amaghị m ihe ọnọdụ m ga-abụ nꞌebe ahụ.
ỌLU OZI 20:23
Karịakwa na Mmụọ Nsọ na-ekpughere m nꞌebe ọ bụla na mkpọrọ na ntaramahụhụ na-eche m nꞌebe ahụ.
ỌLU OZI 23:8
Nꞌihi na ndị Sadusii ekweghị na mbilite nꞌọnwụ ọ bụla dị. Ha ekwekwaghị na mmụọ ozi dị, ma ọ bụ na mmụọ ọ bụla dị nꞌime anyị. Ma ndị Farisii kweere nꞌihe ndị a.
ỌLU OZI 23:9
Mkpọtụ malitere na-ada ike ike. Ụfọdụ ndị ozizi iwu so nꞌotu ndị Farisii biliri ọtọ malite ịrụ ụka nꞌoke olu sị, “O nweghị ihe ọjọọ anyị chọpụtara nwoke a mere. Ma eleghị anya ọ ga-abụ na mmụọ ma ọ bụ mmụọ ozi gwara ya okwu nꞌụzọ Damaskọs ahụ.”
ỌLU OZI 27:23
“Nꞌihi na nꞌabalị gara aga mmụọ ozi Chineke Onyenwe m, na onye m na-efekwa bịakwutere m,
ỌLU OZI 28:26
“Eziokwu ka Mmụọ Nsọ Chineke kwuru mgbe o sitere nꞌọnụ Aịzaya onye amụma kwuo okwu sị, ‘Jekwuru ndị a gwa ha okwu sị, Unu ga-anụ ma unu agaghị aghọta, unu ga-ele anya, ma o nweghị ihe unu ga-ahụ.
Chineke gosiri na Jisọs bụ Ọkpara ya, onye ike nile dị nꞌaka ya, na onye nwekwara Mmụọ nke dị nsọ, mgbe o mere ka o si nꞌọnwụ bilie.
Ọ na-agụ m agụụ nke ukwuu ịbịa hụ unu anya, nꞌihi na achọrọ m ka unu keta oke nꞌonyinye Mmụọ Nsọ nke Chineke nyere m, nke ga-enyere unu aka iguzsi ike nꞌokwukwe.
Ọ bụ eziokwu na ha maara nke ọma na Chineke ga-ekpe ha ikpe nꞌihi ihe ọjọọ ha na-eme, matakwa na Chineke ga-ama ndị nile na-eme ihe dị otu a ikpe ọnwụ, ma ha gara nꞌihu na-eme ihe ndị a, ma na-akwalikwa mmụọ ndị ọzọ ka ha soro na-eme ha.
Nꞌihi na ike ahụ Mmụọ na-enye ndụ na-enye abụrụla nke m, site nꞌịdị nꞌotu nke mụ na Kraịst. Ike a emekwaala ka m nwere onwe m nꞌebe ike nile nke mmehie na ọnwụ dị.
Ma lee! Ọ bụrụ na Mmụọ Chineke bi nꞌime unu na-achị ndụ ọhụrụ unu, unu agaghị emekwa uche ọdịdị ochie unu. Chetakwa na ọ bụrụ na Mmụọ Kraịst ebighị nꞌime gị, ị bụghị onye nke Kraịst.
Ọ bụrụkwa na Kraịst bi nꞌime gị, anụ ahụ gị ga-abụ ihe nwụrụ anwụ nꞌebe mmehie dị, ma Mmụọ Nsọ bi nꞌime gị ga-enye gị ndụ, nꞌihi na o burularị ụzọ mee ka ị bụrụ onye ezi omume.
Ọ bụrụ na Mmụọ Chineke, onye mere ka Jisọs si nꞌọnwụ bilie, bi nꞌime gị, ọ ga-emekwa ka anụ ahụ gị dị ndụ ọzọ, mgbe ị nwụchara, site nꞌike Mmụọ Nsọ ahụ, onye bi nꞌime gị.
Nꞌihi na ọ bụrụ na anyị anọgide na-eme ihe ọdịdị ochie anyị chọrọ, anyị ga-ala nꞌiyi. Kama ọ bụrụ na anyị esite nꞌike Mmụọ Chineke gwepịa, ma wezuga ọrụ ọjọọ nke anụ ahụ, anyị ga-adịkwa ndụ.
Nꞌihi na ndị nile Mmụọ Chineke na-achị bụ ụmụ Chineke.
Mmụọ Nsọ na-agwakwa anyị okwu nꞌime mmụọ anyị, na-agbara anyị ama na anyị bụ ụmụ Chineke nꞌezie.
Mgbe ọ bụla kwa anyị ji ndidi na-eche ihe anyị nwere olileanya na anyị ga-enweta, Mmụọ Nsọ na-enyere anyị aka nꞌọnọdụ adịghị ike anyị nile. Nꞌihi na nꞌọnọdụ ụfọdụ, anyị adịghị ama ihe anyị kwesịrị ịrịọ Chineke ka o meere anyị, ma ọ bụ otu anyị ga-esi doo ọnụ anyị kpee ekpere ahụ, ma Mmụọ Nsọ na-eji ịsụ ude nke mmadụ na-enweghị ike ịkọwa na-arịọrọ anyị arịrịọ.
Ihe m na-agwa unu bụ eziokwu dị ka onye Kraịst nke m bụ. Ekwughị m okwu ụgha. Mmụọ m, nke Mmụọ Nsọ na-achị, na-agbakwara m ama, na ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu.
Nke a ò gosiri na Chineke ajụla ndị Juu ruo mgbe ebighị? Mbaa! Kama nzube Chineke bụ na ọ ga-esite nꞌọdịda ndị Juu mee ka nzọpụta ruo ndị mba ọzọ aka. Ọ chọkwara ka nnabata a ga-anabata ndị mba ọzọ kpalie mmụọ ekworo ndị Juu ịchọrọ onwe ha nzọpụta ahụ.
Nꞌezie, ọ bụrụ na e mere ka ngọzi pụrụ iche rute ụwa nile aka nꞌihi na ndị Juu mehiere, ọ bụrụkwa na ịbụ ogbenye nꞌime mmụọ ha mere ka ndị mba ọzọ keta oke na ngọzi ahụ dị ukwuu, ngọzi babigara ụba oke ọ̀ gaghị adị mgbe a gụnyekọrọ ọnụ ọgụgụ ndị Juu ahụ nile a ga-azọpụta?
Ka okwukwe i nwere banyere ihe dị mma oriri dịrị nꞌetiti gị na Chineke. Egosila ya nꞌebe ọ ga-ewute ndị ọzọ, na mmụọ ha. Ngọzi na-adịrị onye na-adịghị emehie nꞌihi na ọ maara na ihe bụ ezi ihe.
Emeela m ka ndị mba ọzọ bịakwute Chineke site na nkwusa m, site nꞌụdị ndụ m biri nꞌetiti ha, na sitekwa nꞌọrụ ịrịba ama nile m rụrụ nke ha hụrụ, bụ ọrụ m rụrụ site nꞌike Mmụọ Nsọ Chineke. Nꞌụzọ dị otu a emezuola m ihe Chineke chọrọ ka m mee, site nꞌikwusa ozi ọma Kraịst site na Jerusalem ruo nꞌobodo Ilirikum.
1 KỌRINT 1:7
Nꞌihi na ugbu a, Chineke enyela unu amara ya na ngọzi ya nile. O nyekwala unu onyinye Mmụọ Nsọ nile na ike dum unu chọrọ iji mee ihe na-atọ ya ụtọ. Chineke nyere unu ihe ndị a nile ugbu a unu nọ na-ele anya ọbịbịa Onyenwe anyị Jisọs Kraịst.
1 KỌRINT 2:4
Ihe nile m ziri unu na ihe nile m kwusara, bụ ihe dịrị onye ọ bụla nꞌime unu mfe ịghọta. Ejighị m oke okwu na-ezipụta mmụta m, ma ọ bụ amamihe m gwa unu okwu, kama ọ bụ Mmụọ Nsọ Chineke gbara okwu ndị ahụ nile m gwara unu ume, mee ka ọ pụta ìhè nye ndị nụrụ okwu ahụ, na ihe m kwuru bụ okwu Chineke.
1 KỌRINT 2:12
Ma mmụọ nke anyị nwere abụghị mmụọ nke ụwa, kama ọ bụ Mmụọ Chineke nyere anyị inyere anyị aka, ịmata onyinye amara nile Chineke nyere anyị.
1 KỌRINT 2:13
Mgbe anyị gwara unu okwu banyere onyinye ndị a, anyị ji okwu ahụ Mmụọ Nsọ tinyere anyị nꞌọnụ kwuo ya, ọ bụghị okwu nke anyị ji aka anyị họrọ site na mmụta anyị. Ya mere, ọ bụ okwu nke Mmụọ Nsọ tinyere anyị nꞌọnụ ka anyị ji kọwaa ihe gbasara Mmụọ Nsọ.
1 KỌRINT 2:15
Onye ahụ Mmụọ Nsọ na-achị achị na ndụ ya, nwere ike ịghọta ihe ọ bụla. Ụdị nghọta ọ na-enwe banyere ihe ọ bụla na-agba onye ụwa gharịị, na-agbagwoju ya anya, nꞌihi na onye ụwa enweghị ike ịghọta ụdị mmadụ ọ bụ.
1 KỌRINT 3:1
Ụmụnna m, o siiri m ike ịgwa unu okwu dị ka a ga-asị na unu bụ ndị tozuru etozu nꞌime Mmụọ, kama agwara m unu okwu dị ka ndị na-etozughị etozu nꞌime mmụọ, ndị bụ ụmụntakịrị nꞌime Kraịst.
Ọ bụ na unu aghọtaghị na unu bụ ụlọ nsọ Chineke. Ọ̀ bụ na unu aghọtakwaghị na Mmụọ Nsọ Chineke bi nꞌime unu?
1 KỌRINT 4:8
Ndụ unu na-ebi na-egosi na echiche unu bụ na unu enwezuola ihe nile dị unu mkpa. Ee, unu na-ebi ndụ dị ka ndị afọ juru nꞌihe nke Mmụọ. Unu na-ebi ndụ dị ka ndị eze, ndị nọkwasịrịla nꞌocheeze ha, ma anyị onwe anyị nọ nꞌezi. Nꞌezie, ọ gaara atọ ma a sị na unu anọrọla nꞌocheeze unu, nꞌihi na mgbe oge ịnọ nꞌocheeze ruru, ghọtanụ na anyị onwe anyị ga-anọkwa nꞌebe ahụ, iso unu ịchị achị.
1 KỌRINT 5:3
Ọ bụ ezie na mụ na unu anọghị ugbu a, ma mụ na unu nọkwa nꞌime mmụọ. Ikwuru unu eziokwu, amaala m rị onye ahụ ikpe site nꞌaha Onyenwe anyị Jisọs, dị ka a ga-asị na mụ na unu nọ.
1 KỌRINT 5:4
Ya mere, mgbe ọ bụla unu zukọrọ nꞌaha Onyenwe anyị Jisọs, aga m esoro unu nọdụ nꞌime mmụọ m, ike Onyenwe anyị Jisọs ga-adịnyekwara unu.
1 KỌRINT 5:5
Mgbe ahụ sitenụ nꞌụlọ chọọchị Chineke wepụ nwoke a, werenụ ya nyefee nꞌaka ekwensu, ka ọ taa anụ ahụ ya ahụhụ, ka e nwee ike ịzọpụta mmụọ ya, mgbe Onyenwe anyị Jisọs lọghachiri.
Ọ̀ bụ na unu amatakwaghị na ọ bụ anyị ga-ekpe ndị mmụọ ozi nọ nꞌeluigwe ikpe? Gịnị ga-emekwa ka anyị ghara idozi nsogbu nile dapụtara nꞌetiti anyị nꞌụwa a?
Ma ọ bụrụ na e jikọtaa mmadụ ọ bụla na Onyenwe anyị, ya na onye ahụ ga-abụ otu nꞌime mmụọ.
1 KỌRINT 8:7
Ma otu ọ dị, ọ bụghị ndị Kraịst nile maara eziokwu a. Nꞌime ndụ ha nile, ha na-ele arụsị anya dị ka chi dị ndụ. Ha na-echekwa na ihe ọ bụla e ji chụọra arụsị aja, na ọ bụ chi dị ndụ ka e ji ya chụọra aja. Nꞌihi nke a, mgbe ọ bụla ha riri ihe e ji chụọ aja nye arụsị, ọ na-ewute mmụọ ha nke ukwuu nꞌihi na ha na-eche na ihe ha riri emerụọla ha.
1 KỌRINT 8:11
Site nꞌụzọ dị otu a, nwoke a mmụọ ya na-esighị ike, onye bụ nwanne gị, onye Kraịst nwụrụ nꞌihi ya, ga-ala nꞌiyi nꞌihi na o sooro gị, onye maara ihe nile, mee ihe ahụ akọnuche ya gwara ya na ọ bụ mmehie.
1 KỌRINT 12:1
Ugbu a ụmụnna m, ka anyị gafee nꞌokwu gbasara onyinye dị iche iche Mmụọ Nsọ na-enye. Aga m akọwa ya nꞌụzọ ọ ga-esi doo unu nile anya.
1 KỌRINT 12:3
Ugbu a e nwere ọtụtụ ndị na-asị na Mmụọ Nsọ Chineke si nꞌọnụ ha na-ekwu okwu. Ùnu ga-esi aṅaa mata na ọ bụ Chineke si nꞌọnụ ha ekwu okwu nꞌezie? O nweghị onye ọ bụla pụrụ ịkpọku aha Jisọs sị, “Jisọs bụ Onyenwe m” ma ọ bụghị site nꞌike Mmụọ Nsọ. Ọ dịkwaghị onye ọ bụla Mmụọ Chineke na-achị nke pụrụ ịsị, “Jisọs bụ onye a bụrụ ọnụ.”
1 KỌRINT 12:4
Ọ bụ ezie na onyinye Mmụọ Nsọ Chineke dị ọtụtụ, ma ọ bụ otu Mmụọ Nsọ ahụ na-enye ha.
1 KỌRINT 12:7
Mmụọ Nsọ na-arụpụta ọrụ ya nꞌime onye ọ bụla nꞌụzọ ọ ga-esi bara chọọchị nile uru.
1 KỌRINT 12:8
Mmụọ Nsọ na-enye otu onye onyinye ikwu okwu amamihe, na-enyekwa onye ọzọ onyinye ịma ihe ọmụma, dị ka o si chọọ.
Otu Mmụọ Nsọ a na-enye onye ọzọ onyinye inwe okwukwe pụrụ iche, na-enyekwa onye ọzọ onyinye inwe ike ịgwọ ọrịa.
Ụfọdụ ka ọ na-enye onyinye ịrụ ọrụ ịtụnanya, ndị ọzọ ike ibu amụma. Onye ọzọ ka ọ na-enye ike ịkọwa ụdị mmụọ dị iche iche, ma onye ọzọ kwa ka ọ na-enye ike ịsụ asụsụ dị iche iche. Ma ọ na-enyekwa onye ọzọ ike ịkọwa ihe onye na-asụ asụsụ ndị a na-ekwu.
1 KỌRINT 12:11
Ọ bụ otu Mmụọ ahụ na-enye onyinye ndị a nile. Ọ na-enye onye ọ bula onyinye dị iche iche dị ka o si kpebie na dị ka o si dị ya mma.
1 KỌRINT 12:13
Onye ọ bụla nꞌime anyị bụ otu akụkụ anụ ahụ Jisọs Kraịst. Ụfọdụ nꞌime anyị bụ ndị Juu, ụfọdụ abụghị ndị Juu, ụfọdụ bụ ndị nwe onwe ha, ndị ọzọ bụ ndị ohu. Ma ọ bụ otu Mmụọ ahụ mere anyị nile baptizim baa nꞌime otu ahụ Kraịst ahụ. Chineke enyekwala anyị nile nꞌotu nꞌotu Mmụọ Nsọ ahụ.
1 KỌRINT 13:1
A sị na m nwere onyinye ịsụ asụsụ dị iche iche, na asụsụ ndị mmụọ ozi, ma ahụghị mmadụ ibe m nꞌanya, ọ bụ nanị ụzụ ka m na-eme.
1 KỌRINT 15:45
Akwụkwọ nsọ kwuru sị, “E kere Adam nwoke mbụ ka ọ bụrụ mmadụ dị ndụ, ma Kraịst, Adam ikpeazụ, bụ mmụọ na-enye ndụ.”
1 KỌRINT 15:46
Na mbụ anyị na-enwe anụ ahụ mmadụ, ma nꞌikpeazụ Chineke ga-enye anyị anụ ahụ nke mmụọ na-achị.
2 KỌRINT 3:6
Ọ bụ nanị Chineke mere ka anyị zuo oke ịbụ ndị ozi ya, na-akọwara ndị mmadụ ihe banyere ọgbụgba ndụ ọhụrụ nke Chineke chọrọ iji zọpụta ha. Anyị anaghị agwa ha na ọ dị mkpa ka ha debe iwu nile Chineke nyere, kama anyị na-agwa ha na ndụ dịrị ha site na Mmụọ Nsọ. Nꞌihi na ụzọ ochie ahụ nke inwe nzọpụta site nꞌidebe iwu na-eweta ọnwụ, ma nꞌime ụzọ ọhụrụ a, Mmụọ Nsọ na-enye ha ndụ.
2 KỌRINT 3:8
Ọ bụrụ na iwu ahụ ji ebube bịa, anyị kwesịrị ile anya na ụzọ a Mmụọ Nsọ si enye ndụ ga-eji ebube dịkarịrị ukwuu bịa.
2 KỌRINT 5:5
Nke a bụ ihe Chineke kwadebeere anyị. O nyekwara anyị Mmụọ Nsọ ya ka ọ bụrụ ihe ga-egosi anyị na ọ ga-emezuru anyị nkwa ahụ.
2 KỌRINT 11:4
Ọ pụtara ìhè na ọ gaghị abụ ihe siri ike ụfọdụ mmadụ ịbịakwute unu duhie unu, nꞌihi na ọ bụ ihe e jiri mara unu bụ ịnabata onye ọ bụla bịakwutere unu kwusaara unu Jisọs ọzọ nke naabụghị nke anyị na-ekwusa. Ma ọ bụ kwusaara unu ihe banyere mmụọ ozi dị iche, ma ọ bụ zi unu ụzọ ọzọ dị iche a ga-esi zọpụta unu. Unu ga-anabata ozizi ahụ nile.
2 KỌRINT 12:2
Afọ iri na anọ gara aga Chineke kpọọrọ m gaa nꞌeluigwe. Amaghị m ihe bụ ọnọdụ m ji gaa nꞌebe ahụ, ma ọ bụ nꞌanụ ahụ, ma ọ bụ nꞌime mmụọ. Ọ bụ nanị Chineke maara ihe mere nꞌụbọchị ahụ. Kama ihe doro m anya bụ na agara m nꞌeluigwe.
2 KỌRINT 12:18
Mgbe m rịọrọ Taịtọs ka ọ bịakwute unu, ya na nwanna anyị nwoke ọzọ, ọ dị uru ọ bụla ha ritere site nꞌọbịbịa ha bịara nꞌebe unu nọ? É,è! Nꞌihi na ọ bụ otu Mmụọ Nsọ ahụ na-achị ndụ anyị. Anyị na-agbasokwa nzọ ụkwụ ibe anyị na-arụ otu ọrụ ahụ.
2 KỌRINT 12:19
Ma eleghị anya unu ga-anọ naeche na okwu ndị a nile m na-ekwu bụ nꞌihi na m chọrọ ka unu nabatakwa anyị. É,è! Kama ana m ekwu nke a nꞌihu Chineke, onye na-anụ okwu m na-ekwu, na ọ bụ nꞌihi na anyị chọrọ inyere unu aka ka anyị ji na-ede ihe ndị a. Ee, inyere unu aka iwuli mmụọ unu elu, ọ bụghị nꞌihi ọdịmma nke anyị.
Ka ikpe ọmụma Chineke dị nꞌisi onye ọ bụla, ma mụ onwe m kwa, nke ga-ekwusara unu ozi ọma ọzọ dị iche, karịa ozi ọma ahụ anyị kwusaara unu. Ee, ka ikpe ọmụma dịkwa, ọ bụladị nꞌisi mmụọ ozi ọ bụla si nꞌeluigwe bịa kwusaara unu ozi ọma ọzọ dị iche. Ka m kwuokwa ya ọzọ, “Ikpe ọmụma Chineke ga-adakwasị onye ọ bụla kwusaara unu ozi ọma dị iche, karịa ozi ọma ahụ anyị buru ụzọ kwusaara unu.”
Zaanụ m otu ajụjụ a m chọrọ ịjụ unu. Olee otu unu si nata Mmụọ Nsọ? Ọ̀ bụ site nꞌidebe ihe iwu kwuru, ka ọ bụ site nꞌozi ọma unu nụrụ, na nkwere unu kweere?
Ọ̀ ga-abụ na unu aghọọla ndị na-enweghị uche? Ebe unu na-esiteghị nꞌidebe iwu nata Mmụọ Nsọ na mbụ, ùnu si aṅaa chee na idebe iwu ga-eme ka unu bụrụ ndị Kraịst tozuru oke ugbu a.
Ka m jụọkwa unu ajụjụ ọzọ, Mmụọ Nsọ ahụ Chineke nyere unu, na ọrụ ebube ọ rụrụ nꞌetiti unu, ò mere ha nꞌihi iwu unu debere? Ka ọ bụ nꞌihi na unu nụrụ ma kwerekwa ozi ọma ahụ?
Ugbu a Chineke nwere ike iji ngọzi ahụ o kwere Eberaham na nkwa gọziekwa ndị mba ọzọ. Anyị nile kwa, dị ka ndị Kraịst, nwere ike isite nꞌokwukwe anyị nwere nꞌime ya nata Mmụọ Nsọ ahụ e kwere na nkwa.
Gịnị mere Chineke ji nye mmadụ iwu? Chineke nyere iwu ndị a igosi na mmehie dị, na mmehie bara ụba. Ma e mere ka iwu ndị a dịgide nanị tutuu ruo mgbe Mkpụrụ ahụ bịara, onye bụ nwa Eberaham ahụ nkwa Chineke dịịrị. Mgbe Chineke nyere iwu ya o sitere nꞌaka mmụọ ozi ya nye iwu ahụ. Ọ bụkwa mmadụ natara iwu ahụ nyeruo ya ụmụ Izirel.
Ebe ọ bụ na o nwere onye natara iwu a nyeruo ya ndị kwesịrị ịnata ya, o gosiri na nke a abụghị mmezu nkwa ahụ. Nꞌihi na ọ dịghị mkpa na a ga-enwe mmụọ ozi ma ọ bụ onye nnyeru ọzọ dị iche, ndị ga-agba ama banyere mmezu Chineke mezuru nkwa o kwere. Nꞌihi na mmezu nkwa ahụ dịịrị, ma daberekwa nanị na Chineke.
Onye ọ bụla na-agha mkpụrụ nke imejupụta ọchịchọ anụ ahụ ya, ga-esitekwa nꞌanụ ahụ ahụ webata ọnwụ dị ka ihe ubi, ma onye ọ bụla na-agha mkpụrụ nke imejupụta ọchịchọ Mmụọ Nsọ, ga-esite na Mmụọ Nsọ weta ndụ ebighị ebi dị ka ihe ubi.
na-arịọ Chineke nke Onyenwe anyị Jisọs Kraịst bụ Nna Onyenwe ebube nile, ka o nye unu mmụọ amamihe ka unu nwee ike ịhụ na ịghọtakwa nke ọma onye ọ bụ.
Nꞌoge gara aga o nweghị onye ọ bụla a gwara banyere ihe omimi a. Ma ugbu a Chineke ekpugheela ya nye ndị ozi ya dị nsọ na ndị amụma ya site nꞌike nke Mmụọ Nsọ.
Gịnị mere Chineke jiri zube ime ihe ndị a? Ọ bụ nꞌihi na ọ chọrọ ka ndị mmụọ ozi nọ nꞌeluigwe mata ịba ụba nke amamihe ya nꞌụzọ dị iche iche dị ka o si na-arụpụta nzube ya nꞌime nzukọ Kraịst bụ chọọchị.
Ana m arịọkwa Chineke ka o site nꞌịba ụba nke ebube ya nye unu ike na-esite na Mmụọ Nsọ ya bịa, ka unu bụrụ ndị dị ike nꞌime mmụọ unu.
Nꞌihi nke a, amaara m na site nꞌekpere unu, ya na ịgba ume nke Mmụọ Nsọ, ihe ndị a nile dakwasịrị m ga-emesị ghọọrọ m ihe ọma.
Nꞌihi nke a site nꞌụbọchị anyị nụrụ ihe banyere unu, anyị esepụghị aka ikpere unu ekpere. Anyị na-ekpe ekpere na-arịọ Chineke ka o nyere unu aka ịghọta ihe ọ chọrọ ka unu mee. Anyị na-arịọkwa ya ka o nye unu amamihe nke ga-enyere unu aka ịmata ihe nke mmụọ.
Nꞌezie, ọ bụ site nꞌaka Kraịst ka e ji kee ihe nile dị nꞌụwa na nke dị nꞌeluigwe, ndị anyị pụrụ ịhụ anya na ndị anyị na-apụghị ịhụ anya. Ike nile dị iche iche, ma ike nile nke mmụọ dị iche iche, ya na ndị isi ha nile, na alaeze ha, ma ndị na-achị achị nꞌetiti ha, ma ndị na-atụ ihe ga-eme eme. Kraịst kere ihe nile. O kere ha iji ha ịrụ ọrụ dị ka o si dị ya mma, na isite na ha wetara onwe ya otuto.
Nꞌihi na ọ bụ ezie na anọghị m unu nso, ma anọ m nꞌetiti unu nꞌime mmụọ oge nile. Ọ na-atọ m ụtọ nke ukwuu na unu guzosiri ike nꞌokwukwe unu nꞌime Kraịst.
Mgbe ahụ, unu bụ ndị nwụrụ anwụ nꞌime mmụọ unu nꞌihi mmehie, mgbe ahụ kwa, unu bụ ndị mba ọzọ, ndị na-enweghị iwu na-achị ndụ ha, ma Chineke mere ka unu soro Kraịst keta ndụ ọhụrụ, nꞌihi na ọ gbaghaara unu mmehie unu nile.
1 TESALỌNAIKA 1:5
Nꞌihi na mgbe anyị wetaara unu ozi ọma, unu eweghị ya dị ka okwu na-erijughị afọ, kama unu gere nnọọ ntị nke ọma. Okwu nile anyị gwara unu metụkwara mmụọ unu, nꞌihi na Mmụọ Nsọ mere ka unu ghọta nꞌezie na ihe anyị kwuru bụ eziokwu. Unu matakwara otu ndụ anyị si bụrụ ihe ilere anya nye unu, igosi unu na okwu anyị ji bịa bụ eziokwu.
Nꞌihi na ọkpụkpọ Chineke kpọrọ anyị abụghị ka anyị na-ebi ndụ adịghị ọcha na ndụ ọchịchọ ọjọọ, kama ọ chọrọ ka anyị dịrị ọcha. Nꞌihi nke a, ọ bụrụ na onye ọ bụla ajụ ibi ndụ ya dị ka anyị kwuru, ọ bụghị iwu mmadụ ka ọ na-eleda anya, kama ọ bụ iwu Chineke onye nyere anyị Mmụọ Nsọ ya.
2 TESALỌNAIKA 1:7
Ya mere, anyị na-agwa unu, ndị so anyị na-ahụ ahụhụ, na Chineke ga-anapụta unu, nye unu izuike, mgbe Onyenwe anyị Jisọs ga-apụta ìhè na mbara eluigwe, ya na ndị mmụọ ozi ya.
Nꞌezie, ọ ga-eduhie ndị ahụ nile na-aga nꞌọkụ ala mmụọ, ndị ahụ jụrụ ikwenye eziokwu ahụ. Nꞌihi na ha jụrụ ịnabatara onwe ha eziokwu ahụ, jụ ikwere na ya, na ịhụ ya nꞌanya ka ọ zọpụta ha.
1 TIMỌTI 3:16
Ọ bụ eziokwu na ọ dịghị mfe mmadụ ibi ndụ dị nsọ. Ma ụzọ e si ebi ndụ dị nsọ ahụ bụ site na Kraịst, onye ahụ bịara nꞌụwa dị ka mmadụ, onye e gosiri na o nweghị mmehie ọ bụla, na o nwere Mmụọ zuru oke, onye ndị mmụọ ozi hụkwara ma jeere ozi, onye e kwusara ihe banyere ya nꞌetiti mba nile. Onye ndị mmadụ kweere na ya, nabatakwa nꞌebe nile, na onye a nabanyere nꞌeluigwe ebe ọ nọ ugbu a nꞌebube ya.
1 TIMỌTI 5:21
Ana m enye gị iwu a nꞌihu Chineke na nꞌihu Onyenwe anyị Jisọs Kraịst na nꞌihu ndị mmụọ ozi dị nsọ ka i nye okenye ọ bụla mehiere ntaramahụhụ kwesịrị mmehie ya, ma okenye ahụ ọ bụ enyị gị ma ọ bụghị, elekwala onye ọ bụla anya nꞌihu.
2 TIMỌTI 1:8
Ọ bụrụ na ị na-akwali ike nke ime mmụọ ahụ i nwere, ụjọ agaghị atụ gị ịgwa ndị ọzọ okwu banyere Onyenwe anyị, ma ọ bụ ime ka ha mata na m bụ enyi gị. Ọ bụ ezie na m nọ nꞌụlọ mkpọrọ nꞌihi aha Kraịst. Ị ga-ejikerekwa isoro m hụọ ahụhụ nꞌihi Kraịst, nꞌihi na ọ ga-agba gị ume nꞌime ahụhụ.
2 TIMỌTI 1:14
Chezie onyinye ọma ahụ Chineke sitere nꞌaka Mmụọ Nsọ nke bi nꞌime gị nye gị idebe.
2 TIMỌTI 1:16
Ka Onyenwe anyị gọzie ezinụlọ Onisiferọs. Nꞌihi na ọ bịara leta m, gbaa m ume ọtụtụ mgbe. Ọbịbịa ya kpọtere mmụọ m. Ihere emekwaghị ya ịbịakwute m nꞌụlọ mkpọrọ.
O sitere nꞌịba ụba nke ebere ya wụkwasị anyị Mmụọ Nsọ ya nꞌihi ihe ahụ nile Jisọs Kraịst Onye nzọpụta anyị mere.
Jisọs dị ukwuu karịa ndị mmụọ ozi. Aha ya bụ Ọkpara Chineke gosiri nke a. Ọ bụ Nna ya nyere ya aha a. Aha ahụ dịkwa ukwuu karịa aha ma ọ bụ ọkwa nile nke ndị mmụọ ozi.
O nweghị oge Chineke jiri gwa mmụọ ozi ọ bụla okwu sị “Ị bụ Ọkpara m, taa enyela m gị ugwu na nsọpụrụ nke ya na aha ahụ so.” Ma Chineke kwuru okwu dị otu a banyere Jisọs. Nꞌoge ọzọ kwa Chineke kwuru sị, “Abụ m Nna ya, Nwa m ka Jisọs bụkwa.”
Ọzọ kwa, mgbe Ọkpara ya bụ Jisọs, onye ọ mụrụ nanị ya bịara nꞌụwa, Chineke nyere iwu sị “Ka ndị mmụọ ozi nile fee ya ofufe.”
Mgbe Chineke kwuru okwu banyere ndị mmụọ ozi ya, ọ sịrị na ha bụ ndị na-eje ozi. Ha dị ka ikuku na-efesi ike. Ha na-agakwa ozi ha nile dị ka ọkụ na-enwusi ike.
Ò nweela oge Chineke gwara ndị mmụọ ozi okwu, dị ka o siri gwa Ọkpara ya sị “Nọdụ nꞌebe a nꞌakụkụ m, nꞌugwu na nsọpụrụ, tutuu ruo mgbe m ga-egwepịa ndị iro gị nile nꞌokpuru ụkwụ gị?”
Iwu ahụ ndị mmụọ ozi nyere Mosisi bụ ezi iwu. Onye ọ bụla nupụrụ isi nꞌiwu ahụ, natara ahụhụ nꞌihi nnupụ isi ya. Egeghị ntị ọ bụla natakwara ntaramahụhụ dị ka o si kwesị.
Chineke nꞌonwe ya tụkwasịrị akaebe nke ya iji kwagide na okwu ndị a bụ ezie, site nꞌịrụ ọrụ ebube na ọrụ ịrịba ama, na ọrụ ịtụnanya dị iche iche. Chineke kesakwara ọtụtụ onyinye Mmụọ Nsọ, dị ka o siri dị ya mma.
Ọ dịghị mgbe Chineke nyere ndị mmụọ ozi ike ịchị elu ụwa a. Anyị na-ekwu karịsịa ihe banyere ụwa gaje ịbịa abịa.
Nꞌihi na ọ bụ ezie na nwa ntịntị oge i mere mmadụ ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi. Ma ugbu a i werela ịma mma kpube ya nꞌisi dị ka okpueze. I werekwala ihe nile mee ha ka ha bụrụ ebe mgbakwasị ụkwụ ya.”
Jisọs abịaghị ịzọpụta ndị mmụọ ozi. Kama ọ bịara inyere ụmụ ụmụ Eberaham aka.
Mmụọ Nsọ Chineke enyela anyị okwu ndụmọdụ nke na-asị, “Ọ bụrụ na unu anụ olu Chineke taa,
Ọ dị ọtụtụ ihe ọzọ m nwere ikwu banyere Kraịst na otu o siri bụrụ onye nchụaja. Ma ọ rara ahụ ịkọwa ya nꞌụzọ unu ga-aghọta ya. Ọ dị ka ịghọta eziokwu nke ime mmụọ adịghị ekwe unu.
Nꞌime ọnụ ụlọ nke abụọ ahụ, ọ bụrụ na e lee anya nꞌelu igbe ọgbụgba ndụ ahụ, a ga-ahụ ndị mmụọ ozi a kpụrụ akpụ. Ha nwere nku dị ka nnụnụ. Aha ha bụ Cherubim. Ha bụ ndị na-echekwa otuto Chineke. Ma anyị enweghị ike ịkọwacha ihe nile ndị a.
Mmụọ Nsọ jiri ihe ndị a nile na-ezi anyị na nꞌime ọnọdụ ọchụchụ aja ochie, mmadụ efu ọ bụla enweghị ike ịba nꞌebe nsọ kachasị ebe nsọ ahụ nꞌihi na ọnụ ụlọ nke mbụ ahụ a na-akpọ ebe nsọ dị ya.
Mmụọ Nsọ na-agbakwara anyị ama na nke a bụ eziokwu nꞌihi na o kwuru sị,
Ọ bụrụ na o si otu a dịrị nꞌoge Mosisi, gịnị ga-abụ ọnọdụ onye lelịrị Ọkpara Chineke? Gịnị ga-abụ ikpe dịrị ndị na-eme ọbara ọgbụgba ndụ ahụ ka ọ bụrụ ihe ọchị na ihe na-adịghị ọcha? Gịnị ga-abụ ikpe dịrị ndị na-eme Mmụọ nke amara ihe ihere? Ọ bụ ihe doro anya na ndị na-eme ihe dị otu a ga-enwe ịta ahụhụ dị egwu nꞌoge na-abịa abịa.
O sitekwara nꞌokwukwe debe mmemme ngabiga. O fesara ọbara ka mmụọ ozi ahụ Chineke zipụrụ igbu ụmụ ndị Ijipti nile e buru ụzọ mmụọ, hapụ imetụ ụmụ ndị Izirel aka.
Dị ka ịma atụ, ndị bụ nna anyị site nꞌanụ ahụ na-apịa anyị ụtarị mgbe ọ bụla anyị nupụrụ isi. Ma nke a adịghị egbochi anyị ịsọpụrụ ha. O kwesịkwaghị ka anyị rubere Chineke bụ Nna mmụọ anyị isi? Anyị mee nke a, ihe ga-agara anyị nke ọma.
Ma unu abịakwutela Kraịst! Ọ dị ka unu guzo na-ele ugwu Zayọn anya. Unu abịala nꞌobodo Chineke dị ndụ. Unu abịala nꞌobodo ahụ a na-akpọ Jerusalem ọhụrụ. Nꞌebe a igwe ndị mmụọ ozi a na-apụghị ịgụta agụta zukọrọ.
Ire anyị dị ka ọkụ. A tulee ya na akụkụ ọzọ dị nꞌahụ anyị, ọ dị ka nsi. Ọ pụrụ ịmerụ na imebi ndụ anyị nile dị ka otu icheku ọkụ pụrụ isi repịa ụlọ. Ọ bụkwa ọkụ na-esite nꞌọkụ ala mmụọ abịa ka e ji amụnye ire anyị ọkụ ime ka okwu na-esite nꞌire anyị pụta bụrụ ihe na-ebute mmebi na ịla nꞌiyi nye ndụ anyị.
Ụdị amamihe dị otu ahụ esiteghị nꞌebe Chineke nọ bịa. Ọ bụ amamihe nke ụwa, amamihe nke ekwensu, ọ bụghị amamihe nke Mmụọ Nsọ.
1 PITA 1:11
Ha gbalịsịrị ike ịchọpụta ihe Mmụọ Kraịst ahụ bi nꞌime ha na-ekwu, mgbe ọ na-agwa ha okwu. Nꞌihi na okwu ahụ nile Mmụọ Kraịst gwara ha bụ ihe mezuru na ndụ Kraịst. O mezuru nꞌahụhụ ya nile na ebube nile ga-eso ahụhụ a. Ma nꞌoge ahụ ha aghọtaghị mgbe ihe ahụ ha na-ebu amụma banyere Kraịst ga-emezu. Ha amakwaghị nꞌoge ahụ onye ọ ga-emezu nꞌahụ ya.
Ma Chineke mere ka ndị amụma mata na ọrụ ha rụrụ abụghị maka ọdịmma nke aka ha, kama ọ bụ nꞌihi ọdịmma nke ndị ga-ebi nꞌoge dị nꞌihu, bụ unu onwe unu. Ugbu a kwa a na-ekwusara mmadụ nile ozi ọma a. A na-ekwusakwa ya site nꞌike Mmụọ Nsọ ahụ kwuru ha. Ee, a na-ekwusa ozi ọma a nke na-agụ ndị mmụọ ozi nọ nꞌeluigwe agụụ ịnụ ihe banyere ya.
Kama meenụ ka mma unu bụrụ mma si nꞌime ime unu pụta, mma ahụ na-adịghị eme agadi, mma nke mmụọ ịdị nwayọọ, ma mmụọ ịdị nsọ, mma dị oke ọnụ ahịa nꞌihu Chineke.
Nꞌihi na Kraịst nꞌonwe ya hụrụ ahụhụ nwụọ nꞌihi unu. Ọ nwụrụ ọnwụ nanị otu ugboro nꞌihi anyị nile bụ ndị mmehie. Ezi mmadụ na-emeghị ihe ọjọọ ọ bụla nwụrụ nꞌihi ndị ajọ omume, nꞌihi ime ka anyị bịa nꞌihu Chineke. Ọ bụ ezie na e gburu ya nꞌanụ ahụ ma e mere ka ọ dịrị ndụ nꞌime mmụọ ya.
1 PITA 3:19
Ọ bụkwa nꞌime mmụọ ya ka ọ gara kwusaa ozi ọma nye mmụọ ndị ahụ a kpọchiri nꞌụlọ mkpọrọ.
1 PITA 3:22
Ugbu a Kraịst nọ nꞌeluigwe. Ọ nọkwa nꞌakụkụ aka nrị Chineke. Ọ bụ ya na-achị ndị mmụọ ozi nile, ndị ọchịchị nile, na ike nile nke eluigwe.
1 PITA 4:6
Ọ bụ nke a mere e ji kwusaa ozi ọma ọ bụladị nye ndị ahụ nwụrụ anwụ, ndị ahụ e kpere ikpe nꞌanụ ahụ mgbe Chineke ji mmiri bibie ụwa. E kwusaara ha ozi ọma a ime ka ọ bụrụ ihe ga-ekwe mee ka ha dịrị ndụ nꞌime mmụọ ha dị ka Chineke si na-adịkwa ndụ.
1 PITA 4:14
Na-aṅụrịnụ ọṅụ mgbe ọ bụla a na-abụ unu ọnụ, ma ọ bụ na-ekwutọ unu, nꞌihi na unu bụ ndị na-eso Kraịst. Nke a na-ezipụta na Mmụọ ahụ dị ebube, Mmụọ Chineke, bi nꞌime unu.
2 PITA 1:13
Onyenwe anyị Jisọs Kraịst agwala m hoo haa na oge m nwere nꞌụwa adịkwaghị ukwuu, na m ga-anwụ nꞌoge na-adịghị anya. Ya mere, na nwa oge ahụ fọdụrụ, ana m agụ ya nꞌihe ziri ezi ịkpọtụ mmụọ unu na uche unu site nꞌichetara unu ihe ndị a ugbu a m dị ndụ nꞌụwa a.
2 PITA 2:10
Nke ka nke, Chineke maara otu o si emeso ndị ahụ na-agbaso ọchịchọ rere ure nke anụ ahụ mmeso, bụ ndị ahụ jupụtara na nganga na isi ike, ndị ahụ ụjọ na-adịghị atụ ikwutọ ọ bụladị mmụọ ndị ahụ dị ike na ndị jupụtara nꞌebube nke anya na-adịghị ahụ.
2 PITA 2:11
Lee, ọ bụ ezie na ndị mmụọ ozi nọ nꞌeluigwe ndị na-eguzo nꞌihu Onyenwe anyị, dị ike karịa mmadụ ndị a, ma ha adịghị eji ọnụ ha ekwulu mmụọ ndị a dị ike, na ndị dị ebube, nke ndị ozizi ụgha ndị a na-emeghe ọnụ ha ha ekwutọ.
2 PITA 3:18
Bụrụnụ ndị na-eto eto nꞌime mmụọ unu, bụrụkwanụ ndị na-aga nꞌihu ịmụta ihe banyere Onyenwe anyị na Onye nzọpụta anyị Jisọs Kraịst nke ọma. Ka otuto dịrị ya ugbu a na mgbe nile ebighị ebi. Amin.
1 JỌN 2:20
Ma unu adịghị ka ndị ahụ si nꞌọgbakọ anyị pụọ, nꞌihi na Mmụọ Nsọ Chineke nọ nꞌime unu. Unu amụtakwala eziokwu Chineke.
Ma unu anatala Mmụọ Nsọ, onye bụ otite mmanụ ahụ Chineke tere unu. Mmụọ Nsọ ahụ na-ebigidekwa nꞌime unu mgbe nile izi unu ihe bụ eziokwu. Onye ozizi ọzọ adịghị unu mkpa. Nanị ya bụ onye ozizi na-ezi ihe bụ eziokwu oge nile. Mmụọ Nsọ na-agwakwa unu sị unu nọgide nꞌime Kraịst. Ya mere, unu esitekwala nꞌime ya pụta.
1 JỌN 3:14
Ọ bụrụ na anyị ahụ ndị Kraịst ibe anyị nꞌanya, ọ na-ezipụta na a gbapụtala anyị site nꞌọkụ ala mmụọ nye anyị ndụ ebighị ebi.
1 JỌN 3:24
Ndị nile na-eme ihe Chineke kwuru na-anọgidesikwa ike nꞌime ya. Chineke nꞌonwe ya na-anọgidesikwa ike nꞌime onye ahụ. Anyị maara na nke a bụ eziokwu nꞌihi na Mmụọ Nsọ bi nꞌime anyị na-agwa anyị otu ihe ahụ.
1 JỌN 4:2
Ụzọ unu ga-esi mata ma okwu unu nụrụ o si nꞌaka Mmụọ Chineke bụ nke a, ọ̀ na-ekwupụta na Jisọs Kraịst Ọkpara Chineke ghọrọ mmadụ jiri anụ ahụ mmadụ bịa nꞌụwa? Ọ bụrụ na okwu ahụ kwagidere na Jisọs bịara nꞌụdị mmadụ nꞌụwa mgbe ahụ okwu ahụ bụ nke si nꞌebe Chineke nọ bịa.
1 JỌN 4:13
O tinyekwala Mmụọ Nsọ ya nꞌime anyị igosi anyị na o bi nꞌime anyị, na anyị bikwa nꞌime ya.
Nke a bụ ihe Enọk onye bụ mmadụ nke asaa na-esota Adam buru nꞌamụma banyere ha sị, “Lee! Onyenwe anyị na-abịa, ya na nde nde ndị mmụọ ozi ya.
Ha bụ ndị na-eweta nkewa na ndị ọchịchọ anụ ahụ ha na-achị. Mmụọ Nsọ ebikwaghị nꞌime ha.”
Ma unu ụmụnna m, nọgidenụ naewuli onwe unu elu nꞌime mmụọ unu, nꞌelu ntọ ala ahụ anyị kweere nꞌime ya. Na-ekpenụ ekpere site nꞌike Mmụọ Nsọ.
“Dee akwụkwọ nye mmụọ ozi ụlọ nzukọ dị nꞌEfesọs. Ihe ndị a ka ị ga-agwa ya, “Akwụkwọ a m na-edere gị bụ nke m ji ezi gị ozi onye ahụ na-ejegharị nꞌụlọ nzukọ ziri, onye ahụ ji ndị ndu ụlọ nzukọ ndị a nꞌaka ya. Leenụ ihe o kwuru.
“Onye ọ bụla chọrọ ịnụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa nzukọ Onyenwe anyị kwesịrị ime ka ozi a baa ya nꞌime ntị. Onye ahụ na-emeri emeri ka m ga-enye mkpụrụ mbụ sitere nꞌosisi ahụ na-enye ndụ, nke bụ ebe izuike nke Chineke.
“Degara mmụọ ozi ụlọ nzukọ dị na Smarna akwụkwọ a. Ozi dị nꞌakwụkwọ a sitere nꞌaka onye ahụ bụ Mmalite na Ọgwụgwụ ihe nile. Onye nwụrụ anwụ ma na-adịkwa ndụ ọzọ.
Ka onye ọ bụla chọrọ ịnụ ihe nụrụ ihe Mmụọ Nsọ na-agwa nzukọ nke Onyenwe anyị. Ọnwụ nke ugbo abụọ agaghị emekpa onye ọ bụla na-emeri emeri ahụ.
“Dee akwụkwọ a nye mmụọ ozi ụlọ nzukọ dị na Pegamọs sị ya, “Nke a bụ ozi si nꞌọnụ onye ahụ jidere mma agha ukwu ahụ nwere ihu abụọ ahụ nꞌaka ya.
“Ka onye ọ bụla chọrọ ịnụ ihe gee ntị nꞌihe Mmụọ Nsọ na-agwa nzukọ Kraịst. Ọ bụ nanị ndị na-emeri emeri ga-eri achịcha ahụ e zoro ezo, nke bụ ihe oriri ndị nọ nꞌeluige. Ha nile nꞌotu nꞌotu ka m ga-enye ezi nkume ọcha ahụ. A ga-edekwasị aha ọhụrụ nꞌelu nkume ahụ, nke onye ọ bụla ọzọ na-agaghị amata, karịa onye ahụ ga-anata ya.
“Dee akwụkwọ a nye mmụọ ozi ụlọ nzukọ dị na Tiatira. Nke a bụ ozi sitere nꞌaka Ọkpara Chineke onye anya ya na-enwụba nꞌebe nile dị ka ire ọkụ. Ụkwụ ya kwa na-egbu maramara dị ka akpụkpọ ụkwụ e hichara nke ọma.
“Ya mere, ka ndị nile chọrọ ịnụ ihe gee ntị nꞌihe Mmụọ Nsọ na-agwa nzukọ ya.
“Dee akwụkwọ a nye mmụọ ozi ụlọ nzukọ dị na Sardis. Ọ bụkwa ozi a ka a na-ezi gị site nꞌaka onye ahụ nwe mmụọ asaa ahụ na kpakpando asaa ahụ. Amaara m ihe banyere ama ahụ a na-agbara gị na ị bụ nzukọ dị ezi ndụ, na nzukọ dị ike nke ukwuu, ma nꞌeziokwu ị bụ nzukọ nwụrụ anwụ.
Onye ọ bụla na-emeri emeri ka a ga-eyikwasị uwe mwụda ọcha dị otu a. Agaghị m ehichapụ aha ha nꞌakwụkwọ ndụ ahụ. Aga m ekwupụtakwa na ha bụ ndị m nꞌihu Nna m na nꞌihu ndị mmụọ ozi nile.
“Nꞌihi nke a, ka onye ọ bụla chọrọ ịnụ ihe gee ntị nꞌihe Mmụọ Nsọ na-agwa nzukọ ya nile.
“Dee akwụkwọ a nye mmụọ ozi nzukọ dị na Filadelfia. Nke a bụ ozi e ziri gị site nꞌaka onye ahụ dị nsọ na onye eziokwu, onye ahụ ji igodi Devidi, nke o ji emeghepụ ihe onye ọ bụla na-apụghị imechi, na nke o ji emechi ihe onye ọ bụla na-apụghị imeghe.
“Ka onye ọ bụla chọrọ ịnụ ihe gee ntị nꞌihe Mmụọ Nsọ na-ekwuru ụlọ nzukọ ya.
Ka ndị nile chọrọ ịnụ ihe gee nti nꞌihe Mmụọ Nsọ kwuru nye nzukọ Onyenwe anyị.”
Mgbe ahụ, e mere ka m baa nꞌeluigwe nꞌime mmụọ m. Nꞌeluigwe, ahụrụ m ebube na ịma mma ya, hụkwa otu ocheeze na onye na-anọkwasị nꞌelu ya.
Mgbe ahụ ụda yiri ụda egbe eluigwe, ya na amụma na-egbuke egbuke sitere nꞌocheeze ukwu ahụ na-ada ma na-achapụtakwa. Nꞌihu ocheeze ukwu ahụ e nwere oriọna asaa na-enwụ ọkụ. Oriọna ndị a nọchiri ọnọdụ mmụọ asaa Chineke.
Otu mmụọ ozi dị oke ebube pụtara tie mkpu, na-ajụ ajụjụ na-asị, “Ọ̀ bụ onye nwere ike ịnyakapụ akara e jiri kechie akwụkwọ a a pịakọtara apịakọta?”
Ahụrụ m inyinya na-adịghị ezi ọcha. Aha onye na-anọkwasị ya nꞌelu bụ ọnwụ, Inyinya ọzọ nke onye ọzọ a na-akpọ ọkụ ala mmụọ nọkwasịrị na-esokwa ya nꞌazụ. E kere ụwa ụzọ anọ, nyefee ha otu ụzọ nꞌaka, ka ha jiri ọnwụ na ọrịa na anụ ọhia gbuchapụ ndị nile bi nꞌime ha.
Mgbe ihe ndị a gasịrị, ahụrụ m ndị mmụọ ozi anọ ka ha guzo nꞌakụkụ anọ nke ụwa. Ha na-egbochikwa ka ifufe ọ bụla ghara ife nꞌelu ala, na nꞌelu osimiri, na nꞌelu osisi.
Mgbe ahụ ahụkwara m mmụọ ozi ọzọ ka o si nꞌọwụwa anyanwụ na-apụta. Akara Chineke dị ndụ dịkwa nꞌaka ya. O tikuru ndị mmụọ ozi anọ ahụ mkpu, bụ ndị ahụ e nyere ike imekpa ụwa ahụ, ya na oke osimiri na ihe nile dị nꞌime ha, sị ha,
Mgbe ihe ndị a na-eme, ndị mmụọ ozi nile bịara nso ocheeze ahụ na-agba ya gburugburu, na-agbakwa ocheeze ndị okenye ahụ gburugburu na ihe e kere eke anọ ahụ dị ndụ. Ndị mmụọ ozi ndị a nile na-akpọkwa isi ala nꞌihu Onye ahụ nọ nꞌocheeze ahụ. Ha na-efekwa Chineke ofufe, na-asị,
Nꞌoge na-adịghị anya, ahụrụ m ndị mmụọ ozi asaa, ndị na-eguzo nꞌihu Chineke. E nyere ha opi ike nꞌotu nꞌotu.
Mmụọ ozi ọzọ nke ji ite igwe ntakịrị e ji ọlaedo kpụọ bịara guzo nꞌakụkụ ebe ịchụ aja. E nyere ya ihe ịchụ aja na-esi isi ụtọ nke ọ ga-eji gwakọta ya na ekpere ụmụ Chineke, were ya chụọ aja nꞌihu Chineke nꞌebe ịchụ aja e jiri ọlaedo wuo nke dị nꞌihu ocheeze Chineke.
Mgbe ahụ, isisi ụtọ nke ihe ahụ a chụrụ nꞌebe ịchụ aja ahụ, ya na ekpere ahụ ụmụ Chineke kpere, sitere nꞌebe ịchụ aja ahụ mmụọ ozi ahụ jiri ya chụọ aja rigoro elu ruo nꞌebe Chineke nọ.
Mgbe ahụ kwa mmụọ ozi ahụ weere ọkụ sitere nꞌebe ịchụ aja ahụ tinye ya nꞌime ite igwe ntakịrị ahụ o ji chụọ aja, tụda ya, ka ọ danye nꞌime ụwa. Mgbe o mere nke a, ụzụ egbe eluigwe dara, amụma gbukwara nꞌụzọ dị oke egwu. Ala ọma jijiji dakwasịkwara ebe nile nꞌụwa.
Mgbe ahụ mmụọ ozi asaa ahụ jikeere onwe ha ịfụ opi ike ahụ.
Mgbe mmụọ nke mbụ fụrụ opi ike ya, a tụdara nkume ọkụ na ọkụ a gwakọtara ya na ọbara nꞌime ụwa. Nke a mere ka otu ụzọ nꞌime ụzọ atọ e kere ụwa nwuru ọkụ. Ihe nile dị nꞌime ya rechapụrụ ọkụ. E mere ka osisi ọhịa na ahịhịa nile rechapụ ọkụ.
Mgbe mmụọ ozi nke abụọ fụkwara opi ike ya, a tụdara ihe yiri ugwu dị ukwuu na-enwụ ọkụ nꞌime osimiri. Nke a mere ka otu ụzọ nꞌime ụzọ atọ e kere osimiri nile chagharịa ghọọ ọbara.
Mgbe mmụọ ozi nke atọ fụrụ opi ike ya, otu kpakpando dịkarịsịrị ukwuu sitere na mbara eluigwe danye nꞌime otu ụzọ nꞌime ụzọ atọ e kere iyi nile na isi iyi nile, ebe ndị mmadụ si ekute mmiri ha na-aṅụ.
Mgbe mmụọ ozi nke anọ fụrụ opi ike ya, e mere ka otu akụkụ nꞌime akụkụ atọ e kere anyanwụ gbaa ọchịchịrị. Otu a kwa otu akụkụ nꞌime akụkụ atọ e kere ọnwa gbara ọchịchịrị. Ya na otu akụkụ nꞌime akụkụ atọ e kere kpakpando nile. Nke a mere ka anyanwụ hapụ inyekwa ìhè ya nꞌuju dị ka o si eme na mbụ. Otu ụzọ nꞌime ụzọ atọ e kere ehihie ghọkwara oke ọchịchịrị.
Mgbe m nọ na-ele ihe ndị a anya, ahụrụ m otu ugo buru ibu ka ọ na-efegharị na mbara eluigwe na-eti mkpu na-asị, “Ahụhụ! Ahụhụ dịrị mmadụ nile bi nꞌụwa nꞌihi ihe ọjọọ dị iche iche gaje ịbịakwasị ha mgbe ndị mmụọ ozi atọ fọdụrụ fụrụ opi ike ha.”
Emesịa, ahụrụ m mmụọ ozi ọzọ dị oke egwu ka o si nꞌeluigwe rịdata. Igwe ojii gbara ya gburugburu. Eke na egwurugwu dịkwa ya nꞌisi. Ihu ya na-egbukwa maramara dị ka anyanwụ. Ụkwụ ya na-enwukwa dị ka ọkpụrụkpụ ọkụ.
Mgbe mmụọ ozi ahụ ji oke olu, nke dara ụda dị ka ịgbọ ụja nke ọdụm, tie mkpu, egbe eluigwe asaa gbara otu mgbe ahụ zaghachi ya.
Mgbe ahụ, mmụọ ozi ahụ dị ike nke zọkwasịrị ụkwụ ya nꞌelu osimiri, na nꞌala akọrọ ahụ, chiliri aka ya abụọ elu,
Mmụọ ozi ahụ sịkwara na mgbe mmụọ ozi nke asaa ahụ fụrụ opi ike ya, a ga-eme ka ihe omimi nile zoro ezo, nke Chineke sitere nꞌọnụ ndị amụma kwuo nꞌọgbọ gara aga, bụrụ ihe e mezuru emezu.
Mgbe ahụ otu olu sitere nꞌeluigwe gwa m okwu ọzọ sị, “Gaa napụta mmụọ ozi dị ike ahụ guzo nꞌelu oke osimiri na ala akọrọ akwụkwọ nta ahụ o ji nꞌaka ya.”
Ejekwuru m mmụọ ozi ahụ dị ike, rịọ ya ka o nye m akwụkwọ nta ahụ. Ọ zara m sị, “Lee ya, were ya taa ya. Mgbe ị na-ata ya nꞌọnụ gị, ọ ga-atọ gị ụtọ dị ka mmanụ aṅụ. Ma mgbe i lodara ya nꞌime afọ gị, ọ ga-elu gị ilu nꞌafọ.”
Emesịa mmụọ ozi ahụ gwara m okwu sị, “Ị ga-aga buo amụma nye ọtụtụ mmadụ, nꞌọtụtụ mba dị iche iche, nꞌime agbụrụ dị iche iche, nꞌasụsụ dị iche iche na nꞌihu ndị eze nile.”
Ma mgbe ụbọchị atọ na ọkara gafesịrị, Chineke ga-eme ka Mmụọ ya na-enye ndụ banyekwa nꞌime mmadụ abụọ ndị a mee ka ha bilitekwa ọzọ. Mgbe ndị bi nꞌụwa ga-ahụ nke a, ha nile ga-amalitekwa ịtụ oke egwu.
Nꞌihi na mgbe ahụ kwa ka mmụọ ozi nke asaa fụrụ opi ike ya. Mgbe ọ fụrụ opi ya oke olu dị iche iche sitere nꞌeluigwe na-ada nꞌike nꞌike na-asị, “Alaeze nile nke ụwa abụrụla alaeze Onyenwe anyị, ya na Kraịst ya. Ya onwe ya ga-achịkwa achị nꞌebe ihe nile e kere eke dị ruo mgbe nile ebighị ebi.”
Mgbe ihe ndị a gasịrị, agha dị oke egwu dapụtara nꞌeluigwe. Ma onyeisi ndị mmụọ ozi a na-akpọ Maikel na ụsụ ndị mmụọ ozi ya malitere ibuso agwọ ochie ahụ na ndị mmụọ ozi ya a chụdara achụda agha.
Ndị a bụkwa ndị na-emerụghị onwe ha nꞌebe ụmụ nwanyị dị, ndị dị nsọ nꞌime mmụọ ha dị ka ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke. Ha na-eso Nwa atụrụ ahụ na-aga ebe ọ bụla ọ na-aga. Ha bụ ndị e si nꞌetiti ndị mmadụ bi nꞌụwa gbapụta, ka ha bụrụ onyinye e doro iche nye Chineke na Nwa atụrụ ahụ.
Ahụkwara m mmụọ ozi ọzọ ka ọ na-efegharị nꞌime eluigwe. O bu ozi ọma nke ebighị ebi ahụ nꞌaka, nke ọ na-aga ikwusara mba nile, na ebo nile na asụsụ nile na mmadụ nile nọ nꞌụwa.
Mmụọ ozi a were oke olu kwuo okwu sị, “Tụọnụ egwu Chineke, nyekwanụ ya otuto. Nꞌihi na oge ahụ eruola mgbe ọ ga-anọdụ dị ka onye ikpe. Kpọọkwanụ isi ala nye ya, bụ onye kere eluigwe na ala, na oke osimiri na isi iyi mmiri nile.”
Mgbe ahụ mmụọ ozi ọzọ bịara soro ya, na-efegharị na-asị, “Obodo ukwu ahụ bụ Babilọn adaala, lee, ọ daala, nꞌihi na o meela ka mba nile soro ya ṅụrụ mmanya nke ọnụma na ịkwa iko ya na mmehie ya.”
Mgbe ahụ mmụọ ozi nke atọ bịakwara soro ha na-eti mkpu na-asị, “Onye ọ bụla na-akpọ isi ala nye anụ ọhia ahụ si nꞌime mmiri rịpụta, na oyiyi ya ahụ a kpụrụ akpụ, na onye na-anarakwa akara ahụ nꞌegedege ihu ma ọ bụ nꞌaka ya,
aghaghị isoro ṅụọ ihe si nꞌiko iwe Chineke. Iwe Chineke ahụ ka a ga-awụnyekwa, na-agwaghị agwa, nꞌime iko ọnụma Chineke. A ga-ejikwa ọkụ na nkume ọkụ mekpaa ha ahụ nꞌihu ndị mmụọ ozi dị nsọ na nꞌihu Nwa atụrụ ahụ.
Anụkwara m olu nke si nꞌeluigwe daa gwa m okwu sị, dee ihe a nꞌakwụkwọ, “Oge eruola mgbe ndị nile e gburu nꞌihi okwu Chineke ga-anatazu ụgwọ ọrụ ha zuru oke. Nꞌezie, Mmụọ Nsọ na-ekwu na ha bụ ndị a gọziri agọzi, nꞌihi na ugbu a ha ga-ezu ike site nꞌọrụ ha nile na ahụhụ ha nile, nꞌihi na ezi ọrụ ha rụrụ ga-eso ha baa nꞌeluigwe.”
Mgbe ahụ otu mmụọ ozi sitere nꞌụlọ nsọ pụta, tikuo onye ahụ na-anọkwasị nꞌigwe ọcha sị ya, “Ngwa, bido iji mma iwe ihe ubi gị rụọ ọrụ, nꞌihi na oge owuwe ihe ubi eruola. Ihe a ga-aghọ aghọ nꞌụwa achaala.”
Mgbe nke a gasịrị, mmụọ ozi ọzọ sitekwara nꞌụlọ nsọ dị nꞌeluigwe pụta. Ya onwe ya jikwa mma owuwe ihe ubi dị nkọ.
Otu mgbe ahụ, mmụọ ozi ahụ e nyere ike iji ọkụ mebie ụwa tikuru mmụọ ozi ahụ ji mma owuwe ihe ubi dị nkọ sị ya, “Were mma owuwe ihe ubi gị bipụ ụyọkọ osisi oroma nile dị nꞌụwa, nꞌihi na ha nile achaala ikpe ikpe.”
Ya mere, mmụọ ozi ahụ rụnyere mma owuwe ihe ubi ya nꞌụwa, bipụsịa ụyọkọ oroma ahụ chịkọtaa ha, kpojupụta ha ebe Chineke ga-eji iwe zọchaa ha.
Ahụkwara m ihe ịrịba ama ọzọ nke mere nꞌeluigwe. Ọ dị ebube dịkwa oke egwu. Ọ na-ezipụta ihe gaje ịbịa. Ọ bụ ndị mmụọ ozi asaa ka a họpụtara iburu ihe otiti asaa nke ikpeazụ na-abịakwasị ụwa. Mgbe a wụkwasịrị ụwa ihe otiti asaa ndị a, mgbe ahụ ka iwe Chineke ga-ajụrụ.
Otu nꞌime ihe e kere eke anọ ndị ahụ dị ndụ bunyere mmụọ ozi asaa ndị ahụ efere ọlaedo asaa a gbajuru ọnụma Chineke, bụ onye ahụ na-adị ndụ mgbe nile ebighị ebi.
Mgbe ahụ ụlọ nsọ ahụ jupụtara nꞌanwụrụ ọkụ si nꞌebube na ike Chineke na-apụta. Mmadụ ọ bụla enwekwaghị ike banye nꞌime ụlọ nsọ ukwu ahụ tutuu ruo mgbe mmụọ ozi asaa ndị ahụ wụsara ihe otiti asaa ahụ.
Mgbe ahụ anụrụ m oke olu si nꞌụlọ nsọ ahụ na-ada na-agwa ndị mmụọ ozi asaa ahụ okwu sị, “Ngwanụ, gaanụ wụsa ihe dị nꞌefere ọnụma asaa Chineke ahụ nꞌelu ụwa.”
Mmụọ ozi nke mbụ hapụrụ ụlọ nsọ ahụ gaa wụsa ihe dị nꞌefere nke ya nꞌelu ụwa. Mgbe ọ wụsara ya, ọnya ọjọọ na-egbu oke mgbu bịakwasịrị ndị nile bi nꞌụwa, bụ ndị a kakwasịrị akara anụ ọhịa ahụ, na nꞌelu ndị na-akpọrọ oyiyi ya isi ala.
Mmụọ ozi nke abụọ pụrụ gaa wụsa ihe dị nꞌime efere nke ya nꞌelu osimiri nile. Otu mgbe ahụ osimiri nile chagharịrị na-acha dị ka ọbara onye nwụrụ anwụ. Nke a mere ka ihe nile dị nꞌime ha nwụọ.
Mmụọ ozi nke atọ pụrụ gaa wụsa ihe dị nꞌefere nke ya nꞌelu iyi na nꞌelu isi iyi nile. Nke a mere ka ha nile ghọọ ọbara.
Mgbe ahụ anụrụ m ka mmụọ ozi ahụ mmiri nile dị nꞌaka ya kwuru okwu sị, “I kpere ikpe ziri ezi, ebe i mere ka isi iyi ndị a ghọọ ọbara. Gị onye dị nsọ na onye na-adị site na mmalite, na onye na-adịkwa ugbu a.
Mgbe ahụ kwa, anụrụ m ka mmụọ ozi ahụ na-anọ nꞌebe ịchụ aja kwuru okwu sị, “Ee, Onyenwe anyị Chineke pụrụ ime ihe nile, ntaramahụhụ i nyere ha ziri ezi, bụrụkwa eziokwu.”
Mgbe ahụ mmụọ ozi nke anọ pụrụ wụsa ihe dị nꞌefere nke ya nꞌelu anwụ si otu a mee ka anwụ were okpomọkụ ya chagbuo mmadụ nile.
Mgbe ahụ kwa, mmụọ ozi nke ise pụrụ wụkwasị ihe dị nꞌiko nke ya nꞌelu ocheeze anụ ọhia ahụ si na mmiri pụta. Nke a mere ka ọchịchịrị jupụta nꞌalaeze ya. O mekwara ka ndị ọ na-achị tabie ire ha nꞌihi oke ahụ ụfụ.
Mmụọ ozi nke isii pụkwara wụkwasị ihe dị nꞌefere ya nꞌelu mmiri ukwu ahụ bụ Yufretis si otu a mee ka mmiri dị nꞌime ya taa. Nke a mere ka ọ dịrị eze ahụ si nꞌọwụwa anyanwụ mfe ịchịrị ndị agha ya jeruo nꞌakụkụ ọdịda anyanwụ na-enweghị mgbochi ọ ụla.
Mgbe ahụ kwa, ahụrụ mmụọ ọjọọ atọ ndị pụtara ìhè nꞌọdịdị awọ. Ha si nꞌọnụ agwọ ochie ahụ na nꞌọnụ anụ ọhịa ahụ nwere ike ịrụ ọrụ ịtụnanya pụta.
Ha bụ mmụọ nke ajọ mmụọ ndị ahụ na-arụ ọrụ ịrịba ama. Ọ bụ ha na-ejekwuru ndị eze ụwa nile ịchịkọta ha maka ibu agha nꞌụbọchị ukwu ahụ bụ ụbọchị Chineke Onye pụrụ ime ihe nile.
Mgbe ahụ kwa, mmụọ ozi nke asaa wụpụrụ ihe dị nꞌefere nke ya nꞌikuku. Mgbe ọ wụpụrụ ya, otu olu sitere nꞌocheeze dị nꞌụlọ nsọ ukwu ahụ daa ụda sị, “E mezuola ya!”
Mgbe ahụ mmụọ ozi ahụ duuru m nꞌime mmụọ baa nꞌọzara. Nꞌebe ahụ ka m nọ hụ otu nwanyị nọkwasịrị nꞌelu otu anụ ọhịa na-acha ọbara ọbara. Anụ ọhịa ahụ nwere isi asaa na mpi iri. Ihe e dere anụ ọhịa ahụ nꞌahụ bụ nanị okwu ikwulu Chineke.
Ma mmụọ ozi ahụ jụrụ m ajụjụ sị, “Gịnị mere ihe ị hụrụ ji ju gị anya? Aga m agwa gị onye nwanyị a bụ, na ihe anụ a ọ na-anọkwasị nꞌelu ya nọchiri anya ya.
Mmụọ ozi ahụ gwakwara m okwu si, “Osimiri ndi a, na iyi ukwu na iyi nta ndị a nwanyị a na-anọkwasị nꞌelu ha nọchiri anya ndị mmadụ dị iche iche, ndị si nꞌebe nile dị iche iche ma mba dị iche iche nke ụwa.”
Mgbe ihe ndị a nile gasịrị, ahụrụ m mmụọ ozi ọzọ nke si nꞌeluigwe bịa nꞌụwa. E nyere mmụọ ozi a ike dị ukwuu. Ebube ya mekwara ka ìhè jupụta nꞌụwa.
Mgbe ahụ otu mmụọ ozi tụtụlitere otu nkume nke dị ka nkume e ji akwọ ihe, tụba ya nꞌime oke osimiri, tie mkpu sị, “Otu a ka a ga-esi tụfuo Babilọn obodo ukwu ahụ, dị ka m si tụfuo nkume a. A gaghị ahụkwa ya anya ọzọ ruo mgbe ebighị ebi.
Mmụọ ozi ahụ kwa gwara m okwu sị m dee ihe ndị a nꞌakwụkwọ: “Ngọzi na-adịrị ndị ahụ a kpọrọ ka ha bịa soro nꞌoriri ọlụlụ nwụnye Nwa atụrụ ahụ.” Ọ gwakwara m sị, “Okwu a i deturu ugbu a bụ okwu Chineke nꞌonwe ya kwuru.”
Mgbe ahụ ahụrụ m otu mmụọ ozi ka o guzo nꞌime anyanwụ na-eti mkpu nꞌoke olu na-akpọku ụmụ nnụnụ nile na-efe na mbara eluigwe na-asị ha, “Bịanụ! Zukọọnụ! Nꞌihi na Chineke dị ukwuu na-akpọ unu oriri anyasị.
Mgbe ahụ kwa ahụrụ m otu mmụọ ozi ka o si nꞌeluigwe rịda. O ji mkpịsị igodo e ji atụghe olulu ahụ na-enweghị nsọtụ. O jikwa mkpọrọ igwe dị arọ nꞌaka ya.
Mmụọ ozi a jidere agwọ ochie ahụ, bụ agwọ ochie ahụ aha ya bụkwa Onye ọnwụnwa na Ekwensu. O ji mkpọrọ igwe kee ya agbụ. Ọ ga-anọkwa nꞌọnọdụ a otu puku afọ.
Emesịa, mmụọ ozi ahụ tụnyere agwọ ochie ahụ nꞌime olulu ahụ na-enweghị nsọtụ, tụchie ụzọ ya. Ọ kakwara akara nꞌelu ya ka agwọ ochie ahụ hapụ inwekwa ike iduhie mba nile dị nꞌụwa ọzọ tutuu ruo mgbe puku afọ gasịrị. Mgbe afọ ndị a zuru, a ga-atọghepụ ya hapụ ya ka ọ gagharịa nwa ntịntị oge.
Oke osimiri nile nyeghachiri ndị nile nwụrụ anwụ nọ nꞌime ha. Otu a kwa ọnwụ na ala mmụọ nyeghachikwara ndị nwụrụ anwụ dị nime ha. E kpekwara onye ọ bụla ikpe dị ka ọrụ ya si dị.
Emesịa, a tụnyere ọnwụ na ọkụ ala mmụọ nꞌime ọdọ ọkụ ahụ. Nke a bụ ọnwụ nke ugboro abụọ.
Otu nꞌime mmụọ ozi asaa ahụ wụsara ihe dị nꞌefere ha ji bịakwutere m sị m, “Soro m ka m gosi gị nwagbọghọ ahụ bụ nwụnye Nwa atụrụ ahụ.”
O buuru m nꞌime mmụọ buga m nꞌotu ugwu buru ibu nke ịdị elu ya dịkwa ukwuu. Site nꞌebe ahụ o gosiri m obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ka o si na mbara eluigwe ebe Chineke nọ na-arịdata.
Mgbidi ya nile dị obosara dịkwa elu. O nwekwara ọnụ ụzọ iri na abụọ e si abanye nꞌime ya. Ọ bụkwa ndị mmụọ ozi iri na abụọ na-eche ọnụ ụzọ ndị a nche. E dekwara aha ebo iri na abụọ nke ụmụ Izirel nꞌọnụ ụzọ ama ndị a nꞌotu nꞌotu.
Mmụọ ozi ahụ ji osisi e ji atụ ihe, nke e ji ọlaedo mee, nꞌaka ya. O ji ya tụọ obodo ahụ na ọnụ ụzọ ya, na mgbidi ya.
Mmụọ ozi ahụ tụkwara ịdị igbidi nke mgbidi ahụ chọpụta na ọ dị narị nzọ ụkwụ atọ. Mgbe mmụọ ozi a na-atụ ihe ndị a ọ na-agwa m ihe ọnụ ọgụgụ ha bụ dị ka m nwere ike ịghọta.
Emesịa, mmụọ ozi ahụ gosiri m iyi ahụ e si ekute mmiri na-enye ndụ. Mmiri a na-acha nnọọ vaaa dị ka enyo. O sikwa nꞌokpuru ocheeze Chineke na Nwa atụrụ ahụ na-asọpụta.
Mụ onwe m bụ Jọn hụrụ ihe ndị a nile, nụkwa ha na ntị m. Mgbe m dara nꞌala ịkpọ isi ala nye mmụọ ozi a ziri m ozi ndị a,
“Mụ onwe m bụ Jisọs ezitela mmụọ ozi m ka ọ gwa gị ihe ị ga-agwa nzukọ m nile. Ọ bụ m bụ Mgbọrọgwụ ji Devidi ndụ, na onye si nꞌagbụrụ ya pụta. Abụkwa m Kpakpando ụtụtụ ahụ, nke na-enwụ ezi onwụnwụ.”